रोनाल्ड बर्नार्डले वैकल्पिक मिडियाद्वारा एक राम्रो अभिनेतालाई स्वीकार्नुभयो: मार्टिन व्रिजल्याण्ड
मैले नियमित रूपमा हालैका महिनाहरूमा प्रश्न गरेको छु: "रोनाल्ड बर्नार्डको तपाई के सोच्नुहुन्छ?"मैले सँधै प्रश्न सोध्नु वा यो छोटो जवाफ दिएँ र, विशेष गरी, कतिजना मानिसहरु त्यस्ता खतरामा पर्छन् भनेर हेरे। किनभने रोनाल्ड बर्नार्ड एक अभिनेता हो, मेरो लागि पानी माथि पोलको रूपमा खडा हुन्छ। हैन कि मैले आफ्नो प्रोफाइल कोस्टिङ एजेन्सीमा पत्ता लगाएन, तर मसँग एलेक्स जोन्सहरू (इन्भोर्सर्स.com) छैन। तपाईं यसलाई आकृतिमा देख्न सक्नुहुन्छ र विशेष गरी सजिलै सजिलै संग कुनै पनि प्रतिरोध बिना बाहिर आउन सक्छ। यद्यपि रोनाल्डले दावी गरे कि उनको सीवी छैन किनभने उनीहरूले यसलाई कहिल्यै बनाउने गर्दथ्यो, त्यो पनि भन्छिन् कि उसले आफ्नो पुनरुत्थान प्रस्तुत गर्दैन किनभने यो खतरनाक हुनेछ। तर के यो साँच्चै रोनाल्ड को कथाहरु संग? के तिनीहरू सही छन्?
मनमोहक रूपमा म सधैं वैकल्पिक मिडियामा व्यक्तिको आलोचना गर्न चाहन्नँ, तर किनकि सामान्यतया विभिन्न पाठकहरूका धेरै दबाब छ र मानिसहरू कम जवाफसँग सन्तुष्ट हुदैनन्, म अधिक वा कम यस्तो गर्न बाध्य हुन्छु। यो प्रायः आलोचनाको नेतृत्व गर्दछ जुन तपाईं अरूलाई बिन्दु गर्न सक्नुहुन्छ, तर आत्म-प्रतिबिम्ब छैन। खैर, मलाई लाग््छ कि म गलती गर्न को लागी पहिलो हूँ यदि म गल्ती गर्छु र यसलाई ठीक गर्छु। म यसका थुप्रै उदाहरणहरू दिन सक्छु। यो 'इशारा औंलाहरु' को बारे मा छैन, तर सबै को माथि केहि या केहि को बारे मा तपाईंको राय दिन को लागी अनुरोध को प्रतिक्रिया को लागी। तथ्य यह है कि धेरै लोग रोनाल्ड बर्नार्ड जैसे अभिनेताओं द्वारा आकर्षित कर रहे हैं बस दिलचस्प है और इसलिए विश्लेषण के लायक है।
तपाईं किन पक्का हुनुहुन्छ भनेर रोनाल्ड बर्नार्ड एक अभिनेता हुनुहुन्छ? मैले एलेक्स जोन्सलाई यति साहसी भई भन्न हिम्मत गरें, बिनाको लागि कुनै सख्त प्रमाण छैन। कसैले गरेको कार्यले यसलाई स्पष्ट गर्दछ। त्यसैले यसलाई एलेक्स जोन्स उहाँले खुलासे को धेरै गरेको स्पष्ट छ, तर तबसम्म हिलारी क्लिंटन र डोनाल्ड ट्रम्प बीच चुनाव अभियान समयमा, (हामी पनि "चुनाव अभियान" कल जो) को Hegelian dialectic को एजेन्डा सेवा गर्न सिद्ध भएको छ। यहाँ जोन्सले मुखस्पति र ट्रम्पको प्रमोटरको रूपमा स्पष्ट रूपमा सेवा गरे। त्यसैले जोन्स टोकरीको माध्यमबाट एउटै अभिजात वर्गको सेवामा जो कोहीलाई "अभिजात वर्गको प्रदर्शनी" को रूपमा गिर्यो। म वास्तवमा एलेक्स जोन्समा धेरै गहिरो लाग्न सक्छु, तर यो केवल रोनाल्ड बर्नार्डमा जूम गर्न उपयोगी छ, किनभने मैले यो अनुरोध प्राय: धेरै पक्षबाट प्राप्त गरें।
रोनाल्ड इरमा Schiffers द्वारा साक्षात्कार गरिएको छ, जो कोही पनि अचानक बाहिर आयो र कसले कुनै पनि प्रतिरोध अनुभव गरे दिन देखि त्यो अनुभव गरेन। जब मैले5वर्ष पहिले लेख्न थाल्नुभयो, स्वपिचु र बाराकुडा जस्ता साइटहरु द्वारा प्रायः अनलाईनमा अनलाइन कल राखिएको थियो, जुन खुल्ला रूपमा मेरो बारेमा नकारात्मक जानकारी भनिन्छ। दशौं वेबसाइटहरूले मलाई आक्रमण गर्न थाले र यो दिन मेरो घोषणाको साथ केहि गरेन। मैले प्रमाणित गर्न सक्थे कि यो स्वतन्त्रता र विद्रोह पछि ड्राइभिङ्ग बल को थियो जो एक राज्य अधिकारी र एक आरटीडी (एलेस्टर Crowley) पुजारी (जेरोन हुग्वेइजेज) थिए। तथ्य यो कि एक राज्य कर्मचारी हो सम्भव छ कि मेरो घोषणा यस दिनको साथ केहि छैन। त्यहाँ कुनै पनि वकील छैन जसले राज्यमा लड्नका लागि आफ्नो औंलाहरू जलाउन चाहन्छ। मैले हालै स्वेन ह्यूलेमैनलाई अनुरोध गरें कि यदि कसैले आफूलाई विद्रोही वकीलको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ भने यो मेरो लागि लिने हिम्मत छ। म अझै पनि उहाँबाट कुनै जवाफ छैन। किन इममा शिफर्स र अरु अन्य वैकल्पिक मिडियामा रहेका व्यक्तिहरू छन् किनकि ती सबै घृणित साइटहरूले मलाई आक्रमण गरिसकेका छन्। के तपाईलाई थाहा छ के म सोच्न चाहन्छु? किनभने तिनीहरू उही नियोक्ता द्वारा सुरू भएको छ।
अहिले धेरै मान्छे गोप्य सेवाहरू संकट मा अभिनेता को मुख्यधारा मिडिया लागि hoaxes सिर्जना काम गर्न सक्षम छन्, तर वस्तुतः सबै वैकल्पिक अभिनेता संग निर्माण गरिएको छ विश्वास गर्न असम्भाव्य हुन् भनेर विश्वास गर्न हिम्मत। त्यो सिर्फ एक पुल धेरै टाढा हो। AIVD त्यो ठूलो र बलियो र यति व्यापक रूपमा प्रतिनिधित्व गरिएको होइन, विचार हुनेछ। यो केवल मार्टिन व्रिजल्याण्ड को हताशा वा ईर्ष्या छ जसले बेवास्ता गर्दछ र अस्वीकृत गर्दछ, जुन उहाँले यो कल गर्दछ। होइन, यो होइन, किनभने मेरो साइट अझै बढ्दै छ। के तपाई साँच्चै सोच्नुहुन्छ कि AIVD ले नेदरल्यान्डमा वैकल्पिक मीडियालाई अस्तित्वमा राख्न अनुमति दिन्छ, जबकि यी वैकल्पिक मिडियाले वास्तवमा सबैभन्दा ठूलो खतरालाई रोक्न सक्छ? रोनाल्ड बर्नार्ड र मार्टिजेन भ्यान स्टेभेनन जस्ता कलाकारहरूको कथा धेरै विश्वसनीय छ र यो वास्तवमा इरादा हो।
नेदरल्यान्ड्समा, मेरो उपस्थिति सम्म, सुरक्षा प्रयासमा व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित नेटवर्क आवश्यक पर्दछ। मिसाटटले पहिले नै 12 वर्ष भनिन्छ जुन जोरिस डेमकिंक एक pedophile थियो र त्यसमा ध्यान केन्द्रित सबैको ध्यान थियो। अन्य साइटहरूले स्थापित अर्डरको केही आलोचना गरे, तर छाप दिए कि मान्छेका सबै समूहले मेरो बिस्तारबाट टाढाको शो थियो। त्यो 911 र सामान संग अमेरिका को बारे मा केहि थियो। यसबाहेक, म धेरै प्रतिक्रियाहरु देखि भन्न सक्छु, कि मेरो प्रयासले कम्तीमा योगदान दिईएको छ, कि मान्छेहरू हेलोवीनमा बस खराब छ भन्ने महसुस गर्न आएको छ। बीचमा मैले देखेको छु कि हामी पनि नेदरल्यान्डमा मोटोमा लिइयो होक्स र अभिनय। त्यहाँ वैकल्पिक मिडिया नेदरल्यान्डमा कुनै पनि थिएन जुन तपाईंले देखाउनुभयो। अनि यसैले एक कदम उठाउनु पर्छ र इरमा शाइफर्स, मार्टिजेन भ्यान स्टेभेनन र जोन्के मोनमनम्यान जस्तै मानिसहरुलाई सुरू गर्नु पर्छ। यो, राम्रो तरिकाले र जागिर को बिंदु मा एक नियंत्रित तरिका मा पकड गर्न सक्षम हुन। एक गुप्त सेवाको रूपमा तपाईंले वास्तविक र विश्वसनीय सुरक्षा जालहरू सुरू गर्नु पर्छ; एक राम्रो कहानी संग मान्छे। र ती राम्रा कथाहरू गोप्य सेवाहरू थाहा छ, किनकि तिनीहरू अनलाइनमा छन्। द्वारा साइटमा मार्टिन Vrijland तपाईं उदाहरणका लागि पढ्न सक्नुहुन्छ, तर पनि धेरै अन्य साइटहरु र तपाईं काम गर्न वैकल्पिक मिडिया मा आलोचकहरु रूपमा जाने आफ्नै मान्छे तालिम गर्न सक्छन् बाटो मा। तपाईंले तिनीहरूलाई धेरै आलोचना गर्न ठाउँ दिनुहुन्छ। त्यो नियन्त्रित विरोधको भाग हो, उनीहरूले पनि सत्य प्रकट गर्न सक्छन्। त्यो यसको भाग हो र यो पनि थोडा दुख्न सक्छ। यो आन्दोलन पनि नियन्त्रण हुन सक्छ। जसको फिलिम "Surrogates" ब्रूस विलिस संग देखेको छ जो कोहीले, यस स्वतन्त्रता र वास्तविक मान्छे (छैन रोबोट) को अधिकार को लागि लडेको गर्ने कालो विरोध नेता, अन्ततः एक अन्यसरोगेट साबित कि सम्झना हुन सक्छ।
म तपाईंलाई सल्लाह दिन्छु कि वृत्तचित्रमा हेरेन ब्राउनले मेरो विश्लेषणको समझको लागि शीर्षक 'चमत्कार बिक्रीका लागि' को साथमा हेर्नुहोस्। त्यस भिडियोमा, Derren ब्राउनले कसरी देखाउँछ कि उसले कसरी राम्रोसँग कार्य गर्न सक्छ र एक रवरेंड गर्न सही करिश्मा को एक ठोस तरिकामा एक चयन प्रक्रिया कसरी गर्दछ; न केवल एक सेवक, तर एक "विश्वास हेल्डर" सेवक। मलाई यो वृत्तचित्रको बारेमा सोच्नु भएको थियो जब मैले रोनाल्ड बर्नार्डको चलचित्रहरु र धेरै घण्टा हेरेँ यो प्रस्तुति2घण्टा भन्दा बढी। तपाईं तिनीहरूलाई थाहा छ; अमेरिकन टेलिभिजन डम्मीज। के तपाईंले सोच्नु भएको छ कि ती टेलिभिजन डेमेन्टहरू मार्फत पकाउन सजिलो हुनेछ? दसौं हजार मानिसहरू उनीहरूको विश्वसनीय कथाहरूका लागि खान्छन् र साप्ताहिक तिनीहरूले जान्छन् कि कसरी पूर्ण चर्चहरू आकर्षित गर्ने र लाखौं मानिसहरूलाई सुन्न सकिन्छ। तिनीहरू शीर्ष अभिनेताहरू हुन् जसले आफ्नो भूमिका धेरै राम्ररी खेल्छन्, तर ती व्यक्तिहरूले अझ बढी अनुसन्धान गर्दछन्, यो पत्ता लगाउँछन् कि यो प्रायः अत्यन्तै ठूलो छ कि उनी आफैलाई स्वाभाविक बनाउँछन्। "हामी तपाईंको पैसा चाहन्छौं", के आफ्नो व्यापार मोडेलको क्रेडो र बल सम्मोहन प्रविधिहरूमा आधारित छ, जो बोल, शरीरको भाषा र हात इशाराहरूको बाटोमा परिलक्षित हुन्छन्। यसले तिनीहरूलाई सक्षम पार्न बटुले हटाउन धेरै सक्षम बनाउँछ। यस सन्दर्भमा, डेरेन ब्राउनबाट निम्न कागजात हेर्नको लागि धेरै उपयोगी छ। यो नयाँ 'वैकल्पिक मिडिया पादरी' को सम्बन्धमा हामीले हामीले2मा अन्तिम3मा देखेका छौं। यसको बारे सोच्नुहोस् मार्जेजेन भ्यान स्टेभेन, तर अब यो पनि रोनाल्ड बर्नार्ड। विषय क्रान्तिमा विश्वास को रूपान्तरण गर्न को लागी ईसाई रूपान्तरण देखि स्थानांतरित भएको छ र उत्तेजना को चर्च देखि व्याख्यान कक्ष को लागि स्थानांतरित गरेको छ र उस समय को टेलीभिजन डोर्मिन अब इन्टरनेट डोमेन छ। हो, साजिशहरू अवस्थित छन् र हो भने वैकल्पिक मिडियाले तिनीहरूलाई बेवास्ता गर्ने उद्देश्य जस्तो देखिन्छ। 'अपमानजनक' अगाडि पुरुषहरू चरणमा चढ्छन्, तर त्यहाँ जहाज किनाराबाट जगेडाबाट भरिएको छ। तिनीहरू नयाँ ब्यक्तिहरू पनि उठाउन सक्छन् (पछि सबै, यो एक नियन्त्रण गरिएको जहाज हो)! अब बोर्डमा जानुहोस्! (भिडियो अन्तर्गत पढ्नुहोस्)
रोनाल्ड बर्नार्ड तपाईंको पैसा मा बाहिर छ। डी ग्लेड बैंक (वा 'डि ब्लिज बी') सदस्यहरू खोज्दै हुनुहुन्छ। र यसको लागि उहाँले एक अत्यन्त ठोस कहानी सुरू गर्नुभएको छ। यो सबै राम्रो तयार छ। निस्सन्देह उसले त्यो एक्लो गर्दैन। माथिल्लो भिडियो ड्रेरेन ब्राउनमा तपाईँले कसरी यस्तो तयारी गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने एउटा उदाहरण देख्न सक्नुहुन्छ। रोनाल्ड बर्नार्डले "वैकल्पिक मिडिया बाइबिल" सिक्न मन लागेन, उनले मात्र प्रमुख बिन्दु चाहिन्छ औसत साजिश विचारकले के विश्वास गर्छ जान्न त्यसमा लुसिफर-उपासना जोड्नुहोस् र तपाईंको लक्षित समूहमा जगेडाको पूर्ण फ्लेट छ। जस्तै एक पुस्तक सन्दर्भ "द शैतानी पनि एक क्षण मसीही कुना को महत्वपूर्ण thinkers कब्जा र तपाईं आफ्नो दर्शक विस्तार रूपमा, 13 'रबिन डे Ruiter (कि 13 bloodlines सन्दर्भ) bloodlines।
रोनाल्ड बर्नार्डका सबै चलचित्रहरू राम्ररी निर्देशित छन्। सेटिङ पनि राम्ररी छान्नु भएको छ। यो अवश्य आन्तरिक र प्रकाशको सन्दर्भमा ठोस र विश्वसनीय देखिन्छ। तपाईलाई महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुको लागी, यस्ता साक्षात्कारका क्रममा अर्को रोमाञ्चक कथामा ध्यान केन्द्रित गरिनु पर्दछ। इरमा Schiffers तल साक्षात्कार मा कुनै पनि महत्वपूर्ण प्रश्नहरू छैन, र विशेष गरी "आश्चर्यजनक साक्षात्कारकर्ता" को राम्रो तरिकाले भूमिका निभािन्छ। यो धेरै चालाक छान्नु भएको छ र एनएलपी फिलिम (एनएलपी न्यूरो भाषाई प्रोग्रामिंगको लागि खडा छ) त्यसैले मुख्यतः बर्नार्डको अभिनय भावनालाई अझ बलियो बनाइन्छ। जब बर्नार्डले हामीलाई बताउँछ कि उनी बैंक अभिजात वर्गको माथिको नजिक पुगेका थिए कि उनीहरूले बालबालिकालाई बलिदानको बलिदान गर्नुपरेको थियो, इर्ममा स्किफर्सले काम गर्ने भावनाको पुष्टि गर्न मद्दत गर्छन्।
प्रश्न यो हो कि बर्नार्ड (गला मा आलु संग बोल्न, ताकि यो elitist लाग््छ) वास्तव मा बर्नार्ड भनिन्छ; हामी थाहा छैनौं। सम्भवतः उसले एक छद्मनाम प्रयोग गर्दछ। तथापि, के यो कुरा हो कि त्यो सम्पूर्ण वैकल्पिक मिडिया द्वारा पूरा हुन्छ। केवल निबु गुरु.co र मीका क्याटले प्रश्नहरू सोध्थे, तर उनीहरूले महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू बाहिर गएनन्। तपाईं पाठ्यक्रम प्रतिरोध (विश्वसनीयता लागि) को एक सानो बिट प्राप्त गर्नुपर्छ र किनभने Vrijland Micha कैट यी सबै वर्ष Joris Demmink देखाइएको थियो वैकल्पिक मिडिया कोण कुन देखि, आउनुहोस्, पहिले नै लेखिएको थियो जो के यो राम्रो हुन सक्छ यसका लागि उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईएको छ। यसकारण कटले 'विरूपण' को उद्देश्यलाई सेवा गरे र 'pedophilia को बिरुद्ध' को लक्ष्य छैन। त्यसोभए त्यस कोणबाट केही आलोचनाहरू बर्नार्डबाट आउँदछ।
रोनाल्ड बर्नार्डले यसको बारेमा इरमा Schiffers संग साक्षात्कारमा यो कुरा गर्दछ कि तपाईलाई सधैं 'पैसा पछ्याउनु पर्छ'। तर किन उनी आफैलाई हेर्छन् कि त्यो सारा पैसा कहाँ बाट आउँछ? त्यो सबै पैसा जसको साथ उनले यो मुबारक बी पहल सुरु गरे? कसले सबै काम तिर्नुभयो? आह, तर निस्सन्देह, यो सबै राम्रो वर्णन गरिएको छ! निस्सन्देह, इरमा शाइफफरसँग साक्षात्कारले पूर्ण स्थान पायो। कसले यो नयाँ उज्यालो तारा सुन्न चाहँदैनन्? मलाई थाहा छैन कि यो यो जस्तो भएको छ, तर यो मलाई तार्किक सूत्र जस्तो लाग्छ। यसबाहेक, आफैलाई रोनाल्डले आफैलाई 'पैसा पछ्याउँछ'। त्यहाँ कुनै पनि व्यक्ति हो जसले बैंकरलाई (भनिन्छ) सफल उद्यमीलाई कसरी आफ्नो बैंक इजाजतपत्र खरीद गर्न र कसरी ठूलो पैसाको संसारमा अन्न सक्दछन्? किन त्यस्तो बैंकरले गर्छ? कसैले कसैलाई गर्न सक्छ? किनकि उसले / सेवानिवृत्त गर्न चाहानुहुन्छ र यस तरिकामा राणाल्डको सफलताको एक-अप अधिग्रहण र कमीशनले सोचेको छ, राम्रो तयारी आधारमा? त्यो फेरि फेरि 'सत्य हुन धेरै राम्रो' लाग््छ। तपाईले एक अनियमित ग्राहकलाई सम्पर्क गर्नका लागि एक बैंक लाइसेन्स लिनु भएको छ। के त्यो वास्तवमा त्यस तरिकाले काम गर्दछ? के यो सम्भव छ र सम्भव छ? के ती शीर्ष बैंकरहरूले मात्र अनुमति दिएको छ? चलो! कस्ता प्रश्नहरू इर्ममा छन्? तल साक्षात्कार मा केहि ठूलो छलांग छ, तर धन्यवाद रोनाल्ड को एनएलपी हात इशाराहरू तपाईंको सजग सोच को व्याख्या र उनको "सत्य" मा ध्यान केंद्रित गर्न को लागि हो।
जो मान्छे आफ्नो हात को अक्सर एक साक्षात्कार मा अक्सर एनएलपी विशेषज्ञहरु को उपयोग गर्दै छन्, तपाईं उस मा गिन सकते हो। केवल एक कोर्स 'वार्तालापिक सम्मोहन' वा एनएलपी पछ्याउनुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् कि कुन प्रविधिको सबै विकल्प वैकल्पिक मीडियामा भर्खरै चार्लान फ्रान्स पुरुषद्वारा लागू हुन्छ। यही कारणले उनीहरूलाई धेरै ध्यान दिनुपर्छ। यूट्यूब भिडियोहरू र प्रत्यक्ष प्रस्तुतीकरणहरूमा यी प्रविधिहरू सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छन्।
रोनाल्डले कम्पनीहरुलाई के गरे जसको उनले भने भने उनले बैंकलाई लाइसेन्स दिएका थिए भन्दा धेरै पैसा कमाई दिए? के तिनीहरूले बेचेको हो? उन कम्पनीहरु को नाम के थिए र उनलाई ले लिया? के त्यो साँच्चै त्यो पैसा छ? र जो भन्छन् कि रोनाल्ड बताउँछ कि सम्पूर्ण कथा सही छ? के हामी साँच्चै सोच्दछौं कि ठूला बैंकहरूले एक किसिमका स्वतन्त्र उद्यमीहरूलाई भर्ना गर्दैछ पैसाको ठूलो प्रवाह गर्न? के तिनीहरू आफैले मात्र यो गर्छन? आखिर, हामीसँग कुनै पनि दृष्टिकोण छैन। तर हामी रोनाल्डको कथामा विश्वास गर्न चाहन्छौं किनभने यो यति राम्रो सन्तुष्ट हुन्छ। हामी के भन्छौं हामी यस्तो बुरी हुँदैछौं: "अज्ञात बोल्छ!"र रोनाल्डले यो राम्रो तरिकाले बेच्न जान्दछ, किनकि उनी जवान युवतीसँग एक वास्तविक चाउको थिए नाक पैसाको लागि। उनले पहिले नै आफ्नो आमा चासो भने र बच्चाको रूपमा पैसा कमाई भन्दा बढी पैसा कमाई। यो एक एनएलपी विधि हो जुन तपाईंको अवचेतन दिमागलाई छविको साथ "तपाईंको पैसा मेरो साथ सुरक्षित छ, किनकि म बचपन देखि 'बाहिर' को लागि सक्षम भएको छु"। यो छवि पुष्टि छ Schiffers संग गैर साक्षात्कार को सबै पहलुहरु मा, र तपाईंको पैसा Blije बी ("निवेश") को लागि पैसा दिन को लागी पहिले देखि नै प्रोग्रामिंग छ। रोनाल्ड को लागि महत्वपूर्ण प्रश्नहरु को एक पूरी सूची हुनेछ, तर बेशक इर्ममा थिएन। त्यो पनि एक अभिनेत्री पनि साबित हुन्छ। तपाईंको कम्पनीको बिक्रीको लागि तपाईले रोनाल्डलाई के गर्नुभयो? ती कम्पनीहरूको नाम के थिए? कहिलेकाहीं तपाईसँग यी कम्पनीहरू छन्? यी कम्पनीहरूको कारोबार के थियो? तपाईंले आफ्नो बैंक लाइसेन्सको लागि कति पैसा तिर्नुभयो? कसले यो प्रस्ताव गरेको थियो? र धेरै थप विस्तृत प्रश्नहरू उत्पन्न हुनेछन्। रोनाल्डले तिनको पछि त्यस्तो शानदार क्यारियरको लागि साटो जवान छैन? तपाईं वास्तवमा के गर्दै हुनुहुन्छ Ronald? नट र विश्वसनीय डराउरो रोनाल्ड!
मलाई लाग््छ कि यो रोनाल्डले भन्नु भएको छ र त्यो सबै पुस्तकहरु मा पढ्न सक्षम भएको छ, जस्तै कि 'एक आर्थिक हिट म्यान को बयान' जॉन पर्किन्स, तर कुनै महत्वपूर्ण प्रश्न छ कि त्यो वास्तविक विवरण थाहा छ भनेर देखाउने छ। रोनाल्डले उनीहरूलाई 100% थाहा पाउने दाबी गर्छन्, तर अभिनेत्री इरमा संग सहयोगमा एनएलपी शोले यो निर्देशन दिएको छ कि यो केवल तपाईंको महत्वपूर्ण मोड बन्द गर्ने हो। हात इशाराहरूमा ध्यान दिनुहोस्। र मिठाईमा कचर्ड क्रीमको रूपमा तपाईंले आँसु पाउनुहुन्छ। कम से कम; म एक वास्तविक आँसु देख्न सक्दैन, तर एक कामचोर अचम्म; एक काम को भावना, जब रोनाल्ड भन्छन् कि उनले लगभग बच्चा बलि चढाउनु पर्छ। त्यसपछि उसले तोड्यो। आखिर, उहाँ आफैले बुबा हुनुहुन्छ। (कति केटाहरु, उनि कति उमेर हुन्? हामी रोनाल्ड को बारेमा केहि थाहा छैन)। "फ्रिज" (उनीहरूको अन्तस्करणलाई उल्लेख गर्दै) र निर्मित निर्मित कठोरताको कथा लगभग पूर्ण रूपमा चुनेको छ। उनको पिता आक्रामक भएको थियो र पारिवारिक त्रास भएको थियो। तर सौभाग्य देखि रोनाल्डो एक हृदय थियो र जब लुसीफर को बच्चा को बलिदान गर्न को लागि तोड दिया। निस्सन्देह रोनाल्डले मेरो साइटमा पढेको छ र पत्ता लगाइयो कि 'लुसिफर' को विषय पनि विश्वसनीयताको लागि छुट्यो। र 'एक बच्चा बलिदान'? सबैले सुन्न चाहन्छन्।
रोनाल्ड वास्तव मा तपाईंको पैसा निवेश गर्न आदर्श मानिस हो। उहाँले ठूलो जडान बनाउन सक्षम हुन (उहाँले आफ्नै शब्दहरूमा) साबित गर्नुभएको छ। यसैले तिनीहरू तिनको छातीदार बैंकिंग संसारमा उनी धेरै खुशी थिए। त्यसैले रोनाल्ड पैसाको साथ एक वास्तविक जादूगर हो। तिनले कमाई गर्न र जवान उमेरबाट राम्रो पैसा कमाउन सक्थे। हामी जान्दछौं र उनको क्रूर नाकमा विश्वास गर्न चाहन्छौं, तर सामान्यतया म "यहूदी क्षेत्रहरू" बाट छुटकारा पाउँछु, किनभने तिनीहरू यो ठाँउमा एम्स्टर्डममा बोल्छन्। त्यहाँ यी सबै कथाहरू प्रमाणित गर्न सक्ने छ? तपाईं कथालाई बताउनुहुन्छ र पैसाको जादूगर हुनुको छवि राख्नुहुन्छ कसैलाई तपाईंको पैसा दिन जाँदै हुनुहुन्छ, बिना यो थाहा छ कि यो वास्तवमा साँचो हो? हो, एक पूर्व-भोक्सकन्टर स्टाफका सदस्य स्यानन दस हाउले शुभ बीका लागि आवेदन गरेका थिए र रोनाल्डको सीवीका लागि सोध्नुभयो, तर हामी यसको बारेमा [इरमा श्रिफर वेबसाइट] मलाई बताइएको छ कि मीका काट, निबुरु र साउन्ड दस हाउ एक पटकको लागि सँगै काम गरिरहेको छ। स्यानको आवेदन स्पष्ट रूपमा पारिएको थियो। यो मिका काटी हो जुन आज सम्पूर्ण कथा पछि ड्राइभिङ्ग बल र नि: शुल्क मिडिया, नि: शुल्क मिडिया टिभी, शुभ बी र अन्डरस्टेड गरिएको छ, यो साक्षात्कार दिइएको 1 लाई तल सार्न चाहन्छ। म त्यस छलफलमा मिक्स गर्नेछु, तर यो स्पष्ट छ कि हामी एक सुन्दर कथा संग प्रस्तुत गरिएको छ, जसको कुनै पनि ट्रेसेस योग्य छैन। नियन्त्रित विपक्षीहरूको एक भाग नियन्त्रण विरोधीको अर्को भागमा शम हमला बनाउँछ।
किनकि व्यावहारिक रूपमा जो केहि वर्ष को लागि वैकल्पिक मीडिया को पालन गरेको हो अब मानिन्छ कि शैतानिक बच्चाहरु को अनुष्ठानहरु ले रहयो हो, रोनाल्ड बर्नार्ड ले एकदम सही छ बिक्री पिच प्रयोग गरियो। र के यो पूरा गर्दछ कि यो बर्नार्ड थियो 'नजिकैको मृत्यु अनुभव'। उहाँ आफ्नो शरीर बाहिर निस्कनु भएको छ र उनीहरुसँग कसरी काम गरिरहेका थिए। रोनाल्डले के गर्दैछ? त्यसपछि के थियो? के तपाइँ खुल्ला हृदय सञ्चालन गर्नुभयो? वास्तवमा के गरिरहेको थियो? कुन एक शीर्ष साक्षात्कारकर्ता इर्ममा छ! उनले रोनाल्डबाट धेरै विवरणहरू पाउँछन्। होइन, निस्सन्देह! उनी त्यहाँ बिक्री पिच एक विश्वसनीय चित्र दिन र महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हटाउन त्यहाँ छन्।
रोनाल्डको 'नजिकैको मृत्यु अनुभव' न केवल उसलाई एक वित्तीय उच्च उडान गर्छ, तर उसलाई इच्छित आध्यात्मिक सार्थकता दिन्छ। यो केवल पूर्ण रूपमा अविश्वसनीय कथा हो जुन "उनी" तपाईं मर्नु चाहन्थे, तर त्यो काम नगरेको थिएन। रोनाल्डले बसोबास गर्न सक्दछन्। केवल आफ्नो भित्रको जानकारी बाहिर ल्याउन सक्छ र तिनीहरूले उहाँलाई टाउकोमा वा "आत्महत्या" को रूपमा गोली हान्न सक्दैनन्।
मेरो सल्लाह: शुभ्य बी मा आफ्नो पैसा दिनुहोस् र तपाईं आफ्नो पुरानो जीवन जारी राख्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि तपाईं विश्व शान्तिको लागि एकदम सानो मनन गर्न सक्नुहुन्छ वा मार्जिज वान स्टेभेन मार्फत आफूलाई सशक्त बनाउन सक्नुहुन्छ, तर 100 को एक-एक अर्का लगानीले ब्ल्लेज बी चर्चमा एक आदर्श 'भित्ता' खरीद गर्छ। तपाईले पनि 1 मा 4x को लागी ग्रोनलिंक वा पार्टीका लागि पार्टीको लागि मतदान गर्न मतदान बक्समा सार्न सक्नुहुन्छ। सायद तपाईं एक पल्ट विद्रोही हुनेछ र अर्को फोर्स थिरीरी बाउडेट उनको फोरम डम डेमोक्रेसीको साथ बन्नुहुनेछ। तपाईं केही दर्जन दिन चाहानुहुन्छ वा काम छोडेर पेशेवरहरूलाई व्यावसायमा पठाउन चाहानुहुन्छ। र रोनाल्ड यस्तो पेशेवर हो! उहाँका कथाहरू सिद्ध छन् कि। वा कथाहरू केही कुरा गर्दैनन्? आह यो केवल 100 यूरो हो। तपाईले यो सम्झन सक्नुहुनेछ। र यो सफल हुनेछ, किनभने यो वैकल्पिक मिडियामा स्थापित नामहरूद्वारा उत्पन्न हुन्छ। त्यो आफैमा एक चिन्ह हुनुपर्छ कि रोनाल्ड भरोसायोग्य छ। अथवा हामीले अर्को निष्कर्ष निकाल्न सक्दछौ, अर्थात् तिनीहरू सबै एउटै नियन्त्रित AIVD ट्यूबबाट आउँछन्? म तपाईंको निर्णयलाई छोड्छु।
जब मैले5वर्ष पहिले लेखेको थिएँ, मलाई थाहा थिएन कि त्यो खराब हुनेछ। म विचार थियो कि यो एक छद्म नाम छनौट गर्न राम्रो थियो, तर थाहा थिएन कि यदि तपाईं नियन्त्रण बल क्षेत्रसँग सम्बन्धित छैन भने, तपाईं पूर्ण रूपमा बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ। को मानहानि र निन्दा कैद, आक्रमण, आदि को कथाहरू सीमित थिए, तर पनि मेरो छोरी, मेरो सम्पूर्ण परिवार को नाम, जन्म मिति सहित को नाम सम्म गए र मेरो छोरी गरेको विद्यालय भनिन्थ्यो। किनकि पछि ती घृणित साइटहरूको विरूद्धमा परिणत भयो, उनीहरूले यसलाई यो हटाउनुभएको छ, तर पूर्णतया मलाई चालकको बारेमा कुनै शंका छैन। अब, पाँच वर्ष पछि, म बुझ्छ किन। मलाई रोक्न थाल्छ। वैकल्पिक मीडिया मा कुनै पनि छैन जसलाई AIVD द्वारा प्रशिक्षित गरिएको छैन, जसले लेखक या शोधकर्ता को रूप मा लात सकते हो। यही कारणले मलाई तल हटाइयो थियो र यसैले वैकल्पिक मिडियामा कसैले पनि मेरो लागि लिएको छैन। वित्तीय र सामाजिक रूपमा बर्बाद गरीएको छ, तपाईले अझै पनि आफ्नो टाउको पानी माथि राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। सौभाग्य देखि, यो अझै पनि सम्भव छ दानतर किनकि इन्टरनेट लिबिल र हस्पिटलको भनाइ छ, मैले नियमित रूपमा पैसा कमाउन सक्दिनँ, तर जबसम्म घोषणाहरू अपमानित भएन। र बाँकी रहेका अन्य मिडियाले यो अनलाइनमा धागेको स्वर पाउँछ चरित्र हत्या मार्टिन व्रिजल्याण्ड मा। तिनीहरू उहाँलाई रक्षा गर्दैनन्, तर उसलाई पूरै बाँयामा छोड्नुहोस्। के त्यो दयालु छ? होइन, म आफैलाई उदास र मेरो टाउको र सीधा कंधेहरू संग संघर्ष पाउन सक्दिन, तर यो स्पष्ट मीडिया हो कि वैकल्पिक मिडिया पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा छ। अहिले, यो क्रिस्टल स्पष्ट छ कि उनीहरूले यस अभिनेता रोनाल्ड बर्नार्डलाई एक-अर्कालाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् र सबैलाई एक अर्का पछि मार्टिन व्रिजल्याण्ड छोडेर जान्छन्।
निस्सन्देह तपाईं रोनाल्ड बर्नार्ड र वैकल्पिक मेडियाको बारेमा मेरो विश्लेषण र रायसँग सहमत हुनुपर्दैन, तर म यो तपाईंसँग साझेदारी गर्न चाहन्छु (लोकप्रिय अनुरोध गरेर)। म शायद धेरै प्रतिक्रियाहरु को रूप मा "सायद तपाईं यहाँ अभिनेता हुनुहुन्छ", तर तपाईले परिचित वैकल्पिक मिडिया चर्चको पवित्र स्थितिलाई हाइलाइट गर्दा बुझ्न सकिन्छ। म तिमीलाई मेरो विचार दिन्छु। तपाईसँग जो पनि चाहानुहुन्छ
रोनाल्ड बर्नार्डले यसलाई खुसीसाथ कार्य गर्दछ र वैकल्पिक मिडियाले यसलाई प्रबर्धन गर्न जारी राख्छ
ट्याग: वैकल्पिक मिडिया, बैंक, बैंक कुलीन, शुभकामना बी, elitist, विशेष, hoax, आन्तरिक, साक्षात्कार, इरमा Schiffers, बाल बलिदान, रौतहट, रोनाल्ड बर्नार्ड, बोल्छ, स्वेन हलिलेमन, शीर्ष तह, शीर्ष तहहरू
14 अगस्ट 2017 मा 10: 49
मैले सधैं ती फिल्महरू अस्पष्ट पाए। र मैले सोधे, यदि रोनाल्ड बर्नार्डले साँच्चै आचारहरू गरिरहेको छ भने, उसले आफ्नो जीवनको लागि डराउनु पर्दछ! त्यो होइन, किनकि उसले 'समय मा बाहिर गयो'? Duh ...
यो स्पष्ट स्पष्ट टुक्रा मा मार्टिन धन्यवाद। वैकल्पिक मिडिया अनमास्क गरिएको छ। यो सधैं अनौठो लाग्न थालेको छ कि केहि मान्छेले 'टोपी काम' गर्ने शीर्ष टोपीबाट यति धेरै पैसा टाँस्न सकेन।
14 अगस्ट 2017 मा 12: 42
हहाको एक स्क्यानर रोनाल्ड (म व्यक्तिगत हुन सक्दिन तर यसको उपन्यास-लुसिफरियन डिलीवरीको दौडान त्यो टाउको बलियो मा धेरै लामो भएको जस्तो देखिन्छ)।
तर सबै पागलपन ... आदि। एक खराब अभिनेता। धेरै धेरै ईह एह, ब्रेक वाक्य वा वाक्य वा तर्क गर्दैन (पढ्नुहोस्: झूटो-कथा)।
त्यो आफ्नो क्यारियर मा (पढ्नुहोस्: ... ..) कसैले जसको अन्तस्करण बोल्न छ लागि बहस गरिएको यस्तो 2e हात कार बिक्रेता जोडनु Crook रूपमा अस्पष्ट handeltjes सबै प्रकारका साथ सुरु र परीक्षा psychopath असफल ???? HAHAHAHAHA ???? ???? विज्ञापन inf / lib। तर आफ्नो अन्तस्करण उहाँले पनि उहाँले कुनै विवेक छ र मील कुरा किनभने भन्न शायद उहाँलाई एक सम्भव अन्तस्करण धेरै ENG छ हिम्मत गर्दैन भन्न गर्दैन बोल्न थाले। यही कारणले उनीहरूले यो सजावट तोडेको छ: सीट "... अन्तस्करणले यो सुरू गर्यो / चुपचाप नगर्नुस् मलाई यसलाई यो तरीका राख्नुहोस् ..." अन्तमा। (होइन त्यो यसलाई भन्नको हिम्मत छैन)।
बेवकूफ, मूर्ख, बेवकूफ अझै पनि त्यहाँ छन् यदि तपाई 180 डिग्री नियम गर्नुहुन्छ रोचक संकेतहरू (पढ्ने: तथ्याङ्कहरू) प्रयोग गर्दछ, तर त्यो भन्दा बढी छैन।
जहाँसम्म अन्तस्करण संग सम्बन्धित छ, राम्रो तरिकाले म मा छोड्छ: नहीं। लोभ / महत्वाकांक्षाबाट सुरु हुने उहाँको अन्तस्करण होहा साँच्चै हँसिलो बोल्नु भयो। यो पनि एक शब्द छनौट जस्तै LUL एक सभ्य व्यक्तिको लागि बोल्दैन, त्यसैले फेरि फेरि हो haha ​​???? र त्यो एक अर्काको साथ धेरै पैसा बनाउन चाहन्छ ... haha
विच्छेदन बिन्दु हटाउनु (र बोल्नु हुँदैन!) आफ्नो अन्तस्करणको, हो जुन राम्रो तरिकाले काम गरिरहेको थियो।
ओहो हो, धेरै पैसा कमाउनका लागि आफ्नो व्यापारको अलावा, उनले सोमबार एक नीलोका लागि धर्मशास्त्रको अध्ययन गरे।
मलाई थाहा छैन के इरादा हो, तर त्यहाँ विभिन्न संदेहहरू छन्। सायद यो -unfortunately पनि राम्रो bekeken- साँढेको बकवास youwtube च्यानल (को occupier वा विजेता तर भाषामा) साँच्चै वास्तविक सत्य खोज्नेहरूको लागि एक सुरक्षा नेट रूपमा सेवा गर्दैछन्।
अझै पनि केही आकस्मिक कैफियत: किन साक्षात्कारकर्ता तारा छैन चित्रमा (सम्पूर्ण transgender तटस्थ छैन सूचक haha ​​ध्यान दिनुहोस्) गर्छ तिनीहरूले एउटा प्रश्न सोध्न र हामी कहिल्यै यो हेर्न गर्नुपर्छ जब अभिनेता टाउको असफल ???
त्यो पनि आफ्नो हात संग, र उनको सेवानिवृत्ति (maniaheus) गहन हेरविचारमा छ।
"पछाडीको कुराकानी" (लगभग 36 माइनस) मा एक अजीब शब्द पनि छ।
यसका बारेमा धेरै संवेदनशील छ कि तपाइँका धेरै टिपी च्यानलहरू सबै राम्रो तरिकाले सुव्यवस्थित र अनुवाद गर्दै छन्, दिन्छन्, सोच्न सक्छन्, तर हो कि उसले 2e हात कार हातसँग धेरै गर्न सक्दछ। मानिसहरूले धोका दिए पैसा कमाई, ताकि उनले भुक्तान गर्न सक्दछन् (पढ्नुहोस: उनी शक्तिहरू haha)।
14 अगस्ट 2017 मा 13: 01
साथै व्याख्यान चलचित्रमा राम्रो दृश्य लिनुहोस्। यो टेलिभिजन डम्मिजको तुलनामा तुलनात्मक छ जुन गायन जोडाहरू (जो कि भाडामा लिईने र अनुकूल गीतहरू लेख्ने खर्च गर्दैन) सुन्दर आध्यात्मिक गीतहरू प्रदर्शन गर्छन्। तिनीहरू तपाईंलाई पैसा गाईबाट थोपा अगाडी गाईन्छन्।
रोनाल्डको पेन्टिकोस्टल चर्चमा स्वागत छ;
14 अगस्ट 2017 मा 13: 29
@Martin राम्रो लेख। नयाँ युग 70 वर्ष को नरम पुन: आउँदैछन्।
नयाँ बैंक वर्ष 10-एँ 21e शताब्दीमा केटाहरू र Girls (ओह तपाईंलाई हुँदैन) सर्वश्रेष्ठ MENSCHEN छ जिम्मेवार ALLEN हुनुको र अर्थात् यो हाम्रो नयाँ बैंक लोड
हप्पी बैंक यति न केवल बैंक मात्र हो तर केवल वास्तविक ह्याप्पी बैंक ... आउनुहोस् कि SEE देख्न आउँदै छ, तर पहिलो पहा हाहा।
सद्दाम हुसैनले यो प्रयास गरेको छ
गद्दाफीले यो प्रयास गर्यो
अब्दुलले यो प्रयास गरे
... .सेट ... ...
बिटकोइनले यो प्रयास गरेको छ
तर हामी, ब्लुई बैंकलाई यो प्रयास गर्न जाँदैछौं, हामी हामी यसलाई बनाउन सक्छौं (र यसलाई तोड्ने ......)
हामीलाई आउनुहोस्, अब हाम्रो खातामा आफ्नो पैसा राख्नुहोस्, छिटो हामीलाई लगानी गर्नुहोस् किनभने:
होकस लूसीफर पोकस पास
र! पैसा अब तपाईंको छैन
14 अगस्ट 2017 मा 13: 05
तपाईंको रोचक लिङ्कको लागि धन्यवाद। म यो निश्चित रूपमा अध्ययन गर्नेछु।
14 अगस्ट 2017 मा 13: 09
र कसले ती सबै मानिसहरूलाई भुक्तानी गर्दछ? निस्सन्देह, निस्सन्देहः तिनीहरू सबै स्थायी स्वयंसेवकहरू राम्रो कामका साथ, धेरै सभ्य विश्वविद्यालय शिक्षा र समाजमा असल स्थानहरू भएका मानिसहरू हुन्। विश्वसनीय विश्वसनीय व्यक्तिहरूसँग एक ठोस बैंक ????
14 अगस्ट 2017 मा 13: 16
अनि हामी त्यो पिरामिडको लागि क्षमा दिनेछौं ... यो हामीले के सोचेको होइन
14 अगस्ट 2017 मा 18: 37
मैले त्यो लेखको साथ शुरु गरेको छु, म आशा गर्दछु, किनकि यस बैंकको बारेमा अझ बढी लेख्नको लागि। म निश्चित रूपमा साधारण नागरिकको एक पहल होइन, तर विश्वव्यापी यो अवधारणा परिचय गर्न बैंकिंग संसारको सावधानीपूर्वक सेट योजना। तपाईं संयुक्त राष्ट्र को दिशा मा यसलाई 1 विश्व सरकार, 1 विश्व धर्म आदि को अंतर्गत व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ
यो पनि निराशाजनक छ कि अर्मे Schiffers अब De Vrije मीडिया देखि अलग छ। त्यो कि कथा बेच्न वा नीदरल्याण्ड र बेल्जियममा पहिले मानिसहरूको ध्यान गर्न एक च्यानल भन्दा बढी थिएन। सूचना सभाहरू प्रतिक्रियाहरू गज गर्न र जानकारी सङ्कलन गर्न एक प्रकारका व्यायामहरू र सत्रहरू हुन्। त्यसोभए यूट्यूब मार्फत ठूलो हिट बनाउनुहोस्। त्यो च्यानलको माध्यमबाट यो विश्वव्यापी माध्यमबाटर्फत लाखौँ मानिसहरूको ध्यानमा ल्याइएको छ: ईसाई, इस्लाम, तपाइँ यसलाई नाम दिनुहुन्छ। अहिले सबै सँगै।
जसको तरिका: यो सजिलै संग योजना बनाई सावधानीपूर्वक सोचेको छ। धेरै चालाक र चालाक रणनीति। तपाईले तपाइँको लेखमा व्याख्या गर्नुभयो।
डे Blije बी स्विट्जरल्याण्ड मा आधारित छ, यो कसरि अन्यथा हुन सक्छ, यो हो? तिनीहरूको अवधारणा निश्चित रुपमा अगाडी बढिनेछ र त्यसपछि अन्य बैंकहरूलाई हटाइनेछ, मैले अनुमान गर्दछु।
15 अगस्ट 2017 मा 10: 06
र चासो बिना काम गर्ने अवधारणाले सबैभन्दा उत्तम लक्षित समूहलाई आकर्षित गर्न सक्छ: इस्लामिक।
यो सबै परिष्कृत छ।
15 अगस्ट 2017 मा 10: 51
तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ! मलेसियामा एक जनाको मृत्यु भएको छ। उनीहरु एक जनाको मृत्यु भएको छ। उनीहरु एक जनाको मृत्यु भएको छ। कम से कम यो मैले व्याख्या गरे कि समय मा यात्रा। त्यसोभए यी फारमहरू यी दुई पैसा प्रणालीहरू, पश्चिमी र इस्लामिक बैंकिंग सँगै ल्याउन भेट्नुपर्छ।
संलग्न इममा स्प्रिफर्सले आफैलाई नि: शुल्क मिडियामा कसरी प्रस्तुत गरे, कसरी यो अन्यथा हुन सक्छ, एक दर्पणको साथ सेटिङ / व्यवस्थामा। र दर्पण, मैले पढें, एमके अल्ट्रा प्रोग्रामिंग मा प्रयोग गरिन्छ।
14 अगस्ट 2017 मा 13: 24
जब मैले उनको पहिलो साक्षात्कार चलचित्र देखेँ, मैले पहिले नै मेरो रिजर्भेसन पाएँ र दोस्रो मात्र यसलाई अझ बलियो बनायो। विशेष गरी एक बुलाया शुरुवात बिना उनको नतिजाहरु बिना परिणामहरू गर्न सक्छ, म धेरै अचम्म लाग्दथें। म पनि शुरुवात छैन, तर नीदरल्याण्डमा र बाल हेरचाह विरुद्ध मेरो दुर्व्यवहार विरुद्ध मेरो लडाइँमा म आर्थिक, भावनात्मक र सामाजिक स्तरमा नष्ट गरीएको छु। सौभाग्य देखि म एक महान बहाली क्षमता छ!
इरमा Schiffers संग गत वर्ष एक समस्या थियो, मेरो पूर्व असंख्य गुरु जेन गार्डनरको लागि निरन्तर समर्थनको सम्बन्धमा मेरो असम्भव देखाउनको लागि, जसले परमेश्वरका बालबालिकाको दुर्व्यवहारको एक प्रमुख पद थियो।
तर स्पष्टीकरणको लागि, मार्टिनले यो रिपोर्ट गरेको छ कि कम से कम भागमा, तपाईले तपाइँको अलगाव आफैलाई दिनुहुन्छ। म अझै पनि सम्झन सक्छु तपाईंले कसरी मलाई आफैंबाट इन्कार गर्नुभयो। त्यसैले म अझै पनि याद गर्न सक्छु जब मेरो फेसबुक थियो, तपाईले मलाई केहि सम्बन्धमा समर्थनको बयानको लागि सम्पर्क गर्नुभयो। मलाई अब के थाहा छैन। तर जब मैले यो कारणले संकेत गरेको छु कि म यस विषयमा सम्बन्धित विषयको विषय होइन, म प्रतिद्वंद्वीको शिविरमा मौलिक तवरमा आक्रामक तरिका र एफबीमा अनैतिक रूपमा लुटिएको थियो। हो, निस्सन्देह तपाईसँग साथीहरू बनाउनुहुन्न। तपाईंको दृष्टिकोण कहिलेकाहीं एकदम आक्रामक र निर्णय हो। यद्यपि मेरो धारणा छ कि समय को समयमा तपाईं थोडा चकित हुनुभयो।
14 अगस्ट 2017 मा 13: 35
हो, यो मीका क्याटाको मामला थियो। मैले त्यहाँ त्यहाँ पुगें, तर तपाईंले कटेको रक्षामा मेरो फेसबुक समयरेखामा पूर्णतया सम्पूर्ण पत्र लेख्नुभयो। यो स्पष्ट थियो कि तपाईं त्यहाँ त्यहाँ (वैकल्पिक बाकीको विकल्प जस्तै) हटाइयो र मैले सोचे कि वास्तवमा तपाईंको भाग अरेन्डमा गल्ती थियो। मैले तपाईंलाई आक्रामक रूपमा हटाउन सकेन, तर मैले माउस बटन धेरै सफासाथ थिच्यो। मलाई थाहा छैन कि तपाईं अझै पनि देख्न सक्नुहुन्न कि क्याट सबै केहि मूर्ख बनाएको छ, तर जहाँ सम्म मलाई चिन्ता छ, त्यो एक प्रकारको गेज हो।
र त्यो कुरा "" एक प्रकारको अलगाव "को कारणले मलाई स्पष्ट छ। केवल म अलगावमा मनपर्छ (वैकल्पिक मेडियाको तुलनामा) एक क्लबको भाग बन्नु भन्दा अवांछित न्युकर्सरहरूको विरुद्धमा आफूलाई सुरक्षित गर्दछ। यस अर्थमा मलाई यो एकताको रूपमा विचार छैन, तर सरसफाइको रूपमा "मेरो आफ्नै मार्ग पछ्याउँछ र मलाई प्रभाव पार्दैन"। एक अलगाव केवल एक अलगाव जस्तै लाग््छ यदि तपाईं केहि को भाग हुन चाहानुहुन्छ। त्यसैले म अलगावको वर्णन गर्दैन, तर म व्यावहारिक तथ्यको वर्णन गर्दछु कि तिनीहरू तपाईंलाई जोगाउँछन् र कहिलेकाँही आफैले लड्नका निम्ति लड्न।
मलाई लाग्छ कि यो तेजी देखि स्पष्ट हुन्छ कि व्यावहारिक रूपमा सम्पूर्ण वैकल्पिक मिडिया नियन्त्रण गरिन्छ। त्यो शायद तपाईं नहुन सक्नुहुन्न, सम्भवतः तपाईले तोड्नुको कारण पनि हो। मलाई तपाईंको मामला उनको लागि राम्रो तरिकाले थाहा छैन। यो तेजी देखि स्पष्ट हुन्छ कि अवांछित शोधकर्ताहरु वैकल्पिक मीडिया मा नहीं चाहता। जहाँसम्म मलाई चिन्ता छ, वैकल्पिक मिडिया पूर्ण रूपमा अविश्वसनीय भएको छ। थप जानको कारण मात्र जारी राख्नुहोस् र पूर्व-चीडिएको वस्तु निलम्बन गर्नुको सट्टा व्यक्तिलाई पुन: सोच्न प्रोत्साहन दिनुहोस्।
14 अगस्ट 2017 मा 14: 10
स्पष्ट मार्टिनको लागि धन्यबाद। मैले स्पष्ट रूपमा कट्टको सम्मोटो प्रभावको अधीनमा रहेको थिएँ। त्यस पछि मैले मेरो दुर्व्यवहार पनि राम्रो थियो।
यसबाहेक, म तिमीसँग सहमत छु। म अझै पनि अलगावमा छु, तर त्यो पनि अन्य व्यक्तिगत कारणहरू छन्।
14 अगस्ट 2017 मा 14: 16
इतिहासको दृष्टिकोणमा मैले बुझें। मैले कती भेट्नुभन्दा केही समय अघि मलाई लागे। यो हामीलाई क्षमा दिइन्छ ???? तर यो अचम्म छ कि तपाईं पनि बर्बाद हुनुहुन्छ र यो शायद शायद पर्खाल मा एक चिन्ह हो जुन तपाईको साइट धेरै ठूलो भयो र तपाईलाई छोड्नु पर्छ।
मैले सिर्फ तपाईलाई समझाएको छु कि शब्द 'अलगाव' लागू हुँदैन, त्यसैले तपाईंको टिप्पणीमा 'पनि' शब्द पनि।
14 अगस्ट 2017 मा 16: 11
ठीक छ, गलत व्याख्या छनौट गलत व्याख्याको आधारमा। यसैले मनुष्य कुनै पनि अजीब छैन।
14 अगस्ट 2017 मा 17: 55
अन्डेन्ड, तपाईं मेरो लागि एक ठूलो प्रश्न चिह्न हुनुहुन्छ। (म PasOpSmokingPrevents प्रयोग गर्थें निस्क्रिय छ)
मैले तपाईबाट धेरै धेरै सिकेको छु किनभने मैले तपाईंका सबै प्रसारण सुनेको छु।
मैले तपाईंलाई सामान्यतया सुन्दर अस्पष्ट फेला पारेको छु र मैले यसको चकलेट बाहिर निकाल्न सकेन।
कट मामला र तथ्य यो छ कि तपाईंले कहिल्यै मनोवैज्ञानिक Willemijn को लागि झूटो रूपमा जारी गर्नुभएको छ, यो आकार मेरो लागि भरिएको थियो।
हामी सब गल्ती गर्छौं, तर मलाई अझै प्रश्न छ।
म तिमीलाई सोध्छु कि पछि आज रात प्रश्न छ, म अहिले मेरो लम्बस्टर बर्तन जाँच गर्न जाँदैछु।
र भोजन, लम्बाईहरूमा।
15 अगस्ट 2017 मा 07: 01
आधा। म तपाईलाई खुसी छु कि यो 150.000 यूरो ठीक रद्द गरिएको छ। के यो तपाईंको लागि राहत हुनेछ। यसले मेरो लागि प्रश्न उठाउँछ, तर यसलाई एक्लै छोड्नुहोस्। त्यसपछि मेरो अर्को प्रश्न छ।
के तपाईं अहिले रोब वान डेर जोनसँग साथी हुनुहुन्छ वा प्रेमको बारेमा हुनुहुन्छ?
Argusoog को वार्षिक गर्मी को गर्मी भन्दा पहिले यो वर्ष रेडियो प्रसारण को समयमा एक विचित्र खेल गरे, उनले काम गरे - तर धेरै बुरी - कि पुलिस देखि केहि पुरुष दरवाजे मा थिए।
र उनले एक tesla मेशिन निर्माण गरिरहेको थियो र मलाई केवल एक-अर्कालाई केही तारहरू जोड्न आवश्यक छ। के तपाई सफल हुनुभयो?
वा हामी पनि रोब वान डेर जोनले धोखाधडीको रूपमा लेबल गर्न सक्छौ, तपाई के सोच्नुहुन्छ?
आशा छ कि तपाईं यो स्पष्ट जवाफ दिन सक्नुहुनेछ। मलाई लाग्छ कि यो आफैं चीटरहरूबाट टाढा र एक खडा लिन महत्त्वपूर्ण छ।
15 अगस्ट 2017 मा 07: 31
यहाँ बकरी ऊन मोजाहरू ब्वाइओ-ऊली शब्दहरूमा cuddly भालू बताउँछ कि यो कसरी सबै काम गर्दछ। यो Argusoogradio मा प्रसार पछि प्रसारित जब त्यहि मजाक।
यो प्रदर्शन 2013 मा थियो। त्यसैले4वर्ष पहिले ... .. र म मान्छु कि उहाँसँग अझै पनि यही कुरा छ, ZERO परिणाम मलाई लाग््छ।
15 अगस्ट 2017 मा 19: 50
तपाईं पछाडी छ कि यसको पछि हो। यो तपाईंको प्रतिक्रिया को बाकी द्वारा पुष्टि गरिएको छ, जसमा पाँच वर्ष पछि, पुरानो गायहरू, जो लामो समयका लागि रिक्त भएको छ, एक पटक फेरि डचबाट बाहिरियो। तर यो साँच्चिकै मलाई सानो छ कि फेरि फेरि जान्छ।
मलाई रोब वान डेर जोनले केही खेलको बारेमा थाहा छैन।
15 अगस्ट 2017 मा 22: 11
स्पष्ट जवाफको लागि धन्यवाद।
शायद म बस रोब वान डेर जोन र अर्जुगौग को प्रसारण को समयमा पुलिस को दौरा मा भ्रमित हूँ।
16 अगस्ट 2017 मा 13: 28
रोब वान डेर जोन फ्रान्सियर रेडियो को माध्यम ले Argusoog पछि जारी राखयो। यो हुन सक्छ कि उनले यस खेल को 'गेडेन्डर सेशन शुक्र' मा सुनाईएको खेल को प्रदर्शन गरे।
17 अगस्ट 2017 मा 07: 13
त्यो उत्तम हुन सक्छ। सबै पछि, फ्रंटियर रेडियो हरेक हप्ताको कुल दिमाग पनि थियो।
अनि त्यसपछि मलाई गल्ती गर्न पर्दछ। जहाँ सम्म युवा युवतीले राम्रो / मजदूरी बहाली न्युएनएक्सएक्स यूरोबाट ह्यान्ड्यान्डलाई चिन्ता थियो, त्यो एक्सएनमक्स यूरो थियो।
र त्यहाँ अर्को 110.000 यूरो ठीक थियो, युवा हेरविचार Zoermermer द्वारा अनुरोध मा शीर्ष मा। यी2क्लबहरूको तपाईंको ऋण संचयी 270.000 यूरो हुनेछ।
उनीहरु आफ्नो कथा अनुसार चाहन्थे - किनकि केवल एक कथा भन्दा बढी, आईओई होइन - तपाईले राम्रो रद्द गर्नुहोस् यदि तपाइँ युवा हेरचाह एजेन्सी विरुद्ध अपमानजनक र निन्दा गर्नुहुन्छ।
तपाईं यो सहमत हुनुहुन्न
तपाईंले 14 डिसेम्बर 2012 को प्रसारणमा भन्नुभयो: "सामाजिक आर्थिक हत्याराहरु संग वार्ता गरेनन।"
यद्यपि यी दण्डहरू रद्द गरिएका छन्, तर तपाइँ यहाँ साइटमा किन कल गर्नुहुन्छ कि तपाईं पुरा तरिकाले वित्तीय रूपमा नष्ट गरिसक्नुभएको छ।
तपाईं भन्छन् ती तर्कहरू argusoog मा तल 17 मा प्रसारण: 16।
म नामहरू फ्राइड लम्मेरी नामहरू देख्छु।
केवल पाठकहरूको लागि यहाँ:
यो फ्रेम्स लेमेरस, इमरिटस प्रोफेसर र जाहिरा तरिकाले पनि एआईवीडी एजेन्टले वैटर स्टुडियोमा पानीको पानीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
14 अगस्ट 2017 मा 13: 45
प्रिय @ आर्द्र सबैले एक पटक जवाफ दिन्छन् के हो of हार 1) बाटो!
म र म धेरै मान्छे2जान्दछु) जसले आफ्नो मार्ग यति धेरै तर पूर्णतः आफ्नो परिवार, मित्रहरु र परिचितहरु बाट अलग रहदैनन् र राम्रो जानकारी, संवेदनशीलता र विकास संग धेरै अचम्मलाग्दो व्यक्तिहरु बाट अलग छैनन्। यो माथिका चरण तपाईसँग मार्टिन र सबैजना यहाँ छ: नयाँ ELAN सँग OP!
आह, कहिलेकाँही हामी धेरै संवेदनशील र कहिलेकाहीँ संवेदनशील छैनौं।
तर हास्य संग !! ???? ???? हामी निश्चित रूपमा बचत गर्छौं। हास्य पारस्परिक ट्राफिकमा र हाम्रो विरोधी वा हाम्रा दमनकारीहरूको विरुद्धमा हानिकारक छ: घातक।
1) लिंग तटस्थ ????
2) लिंग तटस्थ ??
14 अगस्ट 2017 मा 14: 13
एक सच्चा प्रतिक्रिया।
15 अगस्ट 2017 मा 10: 50
"सूर्यले केही पनि लाग्दैन"
त्यो सूर्य भिडियो: के एक बुल-शिट (जेजा) चप्पल। यदि ऊर्जा निःशुल्क छ भने, युद्धहरू समाप्त हुनेछ। खैर, यो यति सोच्न सकेन, त्यहाँ अझै पनि धेरै मामलाहरू छन् जहाँ सत्तारूढ़ मनोविज्ञान युद्ध मजदुर जारी रहे।
- युद्धको बारेमा आफ्नो तर्कको अगाडी अगाडि ध्यान दिनुहोस्, बाँकी कोठा भित्र जान्छ।
- तपाईंको हार्ड ड्राइभ मेट्नुहोस्। मेरो टाउको र मेमोरी एक हार्ड ड्राइव छैन, सूर्य म्यानियर।
-हाहा 7.18 मा हावा एक अन्य बकरी ऊन मोजा नाक आउँदछ कि धेरै ढिलाइ भयो।
ऊर्जा र कुरा 'केही' न त 'कुनै' नष्ट भौतिक को व्यवस्था को एक भन्छन् सिर्जना गर्न सकिँदैन, म कहिल्यै केही वा केही मा गायब कुरा हुन केहि थप्न सक्नुहुन्छ, तापनि म यो Nothingjewo (पढ्ने: सूर्य देखि) एक अपवाद बनाउन चाहन्छ ???? ????
15 अगस्ट 2017 मा 14: 15
यी नियमहरू (reasonably सिद्ध दुवै सैद्धान्तिक र व्यावहारिक) अझै पनि गर्न Menier पुत्र, menier Rutte, miefrouw Hennis Plas ... आदि, को आदि टियर आदि mienier रूपमा "संस्थाहरू" लागू हुनेछ र धेरै (हो तिमीलाई धेरै अज्ञानता बारेमा beschEUrt) विदेशी मिनिनेयर र मोफ्रोउनन जस्तै ट्रम्पडी, लासर्डे, जन्की, आदि आदि:
यी सबै पागलपनहरूको शंका। psychopaths resp। Egomordic गाजर "NOTHING" गर्दै छन् र कहिले "कहिल्यै" हुनेछैन।
14 अगस्ट 2017 मा 13: 26
रोनाल्ड बर्नार्डको समर्थकहरूको सूची:
सहकारी नि: शुल्क मिडिया
र सूची मा जान्छ ...
छोटो समयमा, सम्पूर्ण वैकल्पिक मिडिया र मुख्य स्ट्रीम मेडियाले यो कथालाई बढावा दिन मद्दत गर्दछ।
14 अगस्ट 2017 मा 13: 33
सायद ती व्यक्तिहरूले पहिले नै यति शक्तिशाली महसुस गर्छन् कि उनीहरूलाई पहिले नै दुर्व्यवहार महसुस गर्छन् र अब चुपचापले भेडाहरूलाई कसलाई थाहा छ र तिनीहरू के हो।
त्यसैले तिनीहरू भेडा विद्रोह, जो तिनीहरूले दमन र 'gemene'volk को eradication आफ्नो umpteenth चरण प्रवेश गर्न सक्छन्, स्वाभाविक केही Luciferian perverse हत्यारा psychopathic संस्कार आशिषित भन्ने आशा।
14 अगस्ट 2017 मा 14: 57
@Arend Zeevat, म निश्चित रूपमा तपाईंको साइट argusoog सम्झन्छु। के तपाईं कहिल्यै यो फेरि लिन विचार गर्नुहुन्छ? तपाईं न्यानो र भरपर्दो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो!
लोगो को बारे मा, भले ही एफबी को माध्यम ले:
डीबी लोगो डी ब्लिज बैंक को दर्पण गरिएको छ। के तपाईं फोटोहरू सहित रोथस्लिड पार्टीका ती फोटोहरू सम्झन सक्नुहुन्छ? निमन्त्रणा कार्ड दर्पणमा लेखिएको थियो, यहाँ हेर्नुहोस् ... https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/0f/13/f9/0f13f9a652a0b3f304f7502bb9db6df5.jpg
दर्पण गरिएको पत्रमा, यसको अर्थ यो यो अर्को दायरा / आयामबाट लेखिएको छ। यो आयाम जसले यो 3d सफ्टवेयर / म्याट्रिक्स नियन्त्रण गर्दछ। यी अकार्बनिक, मृत प्राणी-उपभोग्य पदार्थहरू स्वाभाविक रूपमा बैंकिंग क्षेत्र नियन्त्रण र नियन्त्रण गर्छन्।
अब, बर्नार्ड लोगो मा डीबी स्पष्ट रूप देखि तार्किक छ किनभने तिनीहरू सधैँ आफैले देखाउन चाहन्छन। कन्फुसिसेसले भने, लक्षण र प्रतीकहरूले संसारका शब्द वा नियमहरू शासन गर्दैनन्।
14 अगस्ट 2017 मा 15: 19
तपाई प्रायः देख्नुहुन्छ कि उनी साक्षात्कारको बेला एनएलपी प्रयोग गर्छन्। 'तपाईं अन्तस्करणलाई स्विच गर्न चाहानुहुन्छ ... त्यहाँ एक मूल्य ट्याग विपरीत छ' र त्यसपछि औंठी अचानक माथि जान्छ। बेवकूफमा सही अनुवाद सुनिश्चित गर्न को लागी धोखा र धोखा उत्कृष्ट छ। वा केही समयअघि बारेमा बच्चा बलिदान एक कूचो लगाउनु इशारा 'म तपाईंलाई थाहा थिएन भनेर बताउन बारेमा छु के को तारा (पारदर्शी रूपमा) साक्षात्कार गर्न भनेर बनाएको थाले, र यो धेरै कठोर र तपाईंले मलाई छुरी हान्नु किनभने भावना मा नाटकीय सहज शूटिंग छ राम्रो र त्यसपछि स्क्रिनमा यो राम्रो छ। वान स्टेभरले सोचेका छन् कि लगभग सबै डच मान्छे 'धोखा' गर्न चाहनुहुन्छ कसरी सिक्नको लागि 'उच्च प्रविध अपराध'। उहाँले एक बहिष्कृत यदि 'आध्यात्मिक-transhuman' विकास मा अर्को चरण जाने र एक पूर्ण नियंत्रणीय प्रेत समाज द्वारा पुन: प्राप्त गर्न कसरी भावनात्मक र मानसिक र मनन सामना गर्न कसरी मदत गर्न सक्नुहुन्छ (जस्तै अपराधी कुलीन रूपमा) पाता, नयाँ आक्रोश व्यवहारहरू विरुद्ध। श्री मेसिंग संग परामर्श मा नियमित रूप देखि कफी मा भएको छ। 'नकली नारंगी' सेवामा नियन्त्रित वैकल्पिक मिडियाले 2013 को वरिपरि मुस्कुराउँथे, जसमा उनीहरूले शिकार गर्न थाल्छन्।
के छैन, अझै पनि आउन सक्छ। https://wikikids.nl/Bataafse_Revolutie
14 अगस्ट 2017 मा 17: 12
मीका काटले उनीहरूको बिरुद्धसँग कुनै गम्भीर रूपमा लिन सक्दैनन्
मिनेट2मा, 37 (भिडियो) उहाँले पनि फेरि उहाँले कुनै संकेत थियो जो र विशेष गरी प्रकरण Anass Aouragh मा जांच त्यो समय नेदरल्यान्ड कब्जा राखिएको के केही कुराहरूमा भनिएको छ। मार्टिन भ्रिजल्याण्डले यस बारेमा प्रमाणित तथ्याङ्क र शोध निष्कर्षको बारेमा लेखेको छ। साइट त्यसपछि klokkenluideronline (बिरालो) र Boublog (Boudintje) र अब Moud Oortwijn मात्र mushy Jays कि कुरा को लागि यो साइट, र कुरा Anass भन्दा अझै निश्चित छ। र त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जहाँ बुझाएको वैकल्पिक मिडियाले आफ्नो औंलाहरू जलाउँदैन, तिनीहरूको लागि कथाको अन्त नहुन सक्दैन। (MH17 को बारे मा अंतरिक्ष मा उनको व्यावहारिक दर्शक संग Guido Jonkers, चार्तन)
शायद आरेन्ड मद्दत गर्न चाहन्छ, सुपर हुनेछ
यो मान्छे कम से कम टोकरी मा पुग्छ र समाप्त भएको छ, बस यसलाई बेवास्ता गर्दछ
14 अगस्ट 2017 मा 17: 51
14 अगस्ट 2017 मा 21: 46
त्यो सम्पूर्ण बर्नार्ड प्लेको बाबिलोन सरकारको एक ठूलो मनोविज्ञान हो।
तथ्य यो हो कि 'बर्नर' को पुन: सुरुवात छैन, र कुनै पृष्ठभूमि फेला पार्न / जाँच गर्न सकिँदैन, पर्याप्त भन्छ। के यो वास्तविक नाम हो? Enz आदि
तपाईं मकचीएली पुरस्कार बाट बेबिलोनियर, सूची र रकमको स्वामी, के एक बुल-छाट कथा।
15 अगस्ट 2017 मा 10: 21
ब्लेजर बैंक \_ Angry बैंक को लागी शुभ बैंक 'दर्पण लेखन' हो! ????
15 अगस्ट 2017 मा 10: 29
यदि मैले सही ढंगले बुझेको छु भने, एक्सएनजेक्स यूरोको एकदम ठूलो मात्रा अरेन्डे जेवतद्वारा पर्खिएको छ। कसले? विचार के हो?
माफ गर्नुहोस्, यो धेरै संदिग्ध छ।
15 अगस्ट 2017 मा 19: 01
मैले संधै शंका गरेको छु कि 150.000 यूरो को ठीक एक ठूलो मोटो झूट हो।
यो - यदि मैले सही रूपमा बुझें - युवा युवा हेरविचार विरुद्ध वा झूटो आरोपहरूको साथ गर्नु पर्दछ।
म गहिरो खैरो संदेह छ कि त्यो एक उचित mongering hoaxje थियो। चिन्ता यति। अर्को शब्दमा, युवा हेरचाह र पेडोमोफिया विरुद्ध आरोपहरूसँग सावधान रहनुहोस् किनभने तिनीहरू पूर्णरुपमा तपाईलाई नष्ट पार्छन्।
समस्या एक बिट -just छ Arend वैन der Žon रूपमा सधैं overigens- त उहाँले के कुरा छ बुझ्न धेरै गाह्रो साधारण छ कि यसको शब्द मा अस्पष्ट।
ज्योतिषी ली म्यानरहरू हो, वा कम्तीमा थियो, साझेदार आर्काइन्छ।
लीमा एक राजनीतिक पार्टी (स्पष्ट रूपमा नियन्त्रण विरोधी) मान्स र आत्मा भनिन्छ।
त्यहाँ एक पटक रेडियो प्रसारण Oldekamp को SOPN र मानव र आत्मा, म यी दुई दल आफ्नो मालिकको साथ सँगै काम गर्न सकिएन deduced जो बाट एक नक्कली बहस थियो, तर फारम लागि त एउटा नक्कली बहस आयोजित। सायद रेडियो प्रसारण अझै पनि अनलाइन पाउन सकिन्छ।
लिय छ / अर्नहेमको मेयरसँग सम्बन्ध थियो (मैले तस्बिरहरूमा देखेको छु)।
यद्यपि इमो संदिग्ध वैसे पनि यो छ किनकी अरनहेम NWO शिल / पान को गन्तव्य जस्तो देखिन्छ।
त्यसोभए जब तपाइँ डटहरू (थोप्लाहरू जोड्दै) जडान गर्नुहुन्छ, त्यहाँ धेरै उल्लेखनीय चीजहरू विपक्षमा जाँदैछन्।
16 अगस्ट 2017 मा 10: 27
राजनीतिक रूपमा मार्क्सवादी प्वाइन्टहरू के छन् जुन सँगै जोडिएको हुन सक्छ:
प्रो बहु संस्कृतता (एक ला स्टीव ब्राउन, टक्सएक्सएनएमएक्सएक्सएमरा आदि)
प्रो समलैंगिक प्रचार (एक ला स्टीव ब्राउन, टक्सएक्सएनएमएमएक्सएमएमरा आदि)
UFOs, Niburu, Shuman Resonation Chatter।
Tesla प्रविधिहरू तर क्रमशः 911 सँग लिङ्क हेर्न चाहान्छ।
छिटो र डा। जुडी वुडका शब्दहरू मोडिदिनुहोस् र 'सिद्धान्त'
वास्तविक साजिशहरूमा पानीलाई ठिक पार्नुहोस्।
यस्तो जस्तै। Coen Vermeeren (911A र ई, स्टीवन ई जोन्स, रूप तथ्याङ्कले द्वारा 911-gatekeepers सन्दर्भ रिचर्ड Gage। Coen Vermeeren 911 gatekeepers पढाइ विश्वविद्यालय डेल्फ्ट संगठित।
सही प्रश्नहरू नगर्नुहोस् (स्टीव बीटक्सक्सममेरा, मारिया WeAreChange, इरमा Schiffers आदि।
फज्जनेस, साजिशको बारेमा ऊनी भाषा।
Anti-pseudonyms प्रयोग गर्नुहोस्।
Meningnietus को लक्षण
चुने मेमोरी समस्याहरू
प्रसारणको क्रममा विचलनको रूपमा कुनै विरोध वा विरोध गरेन।
सबै प्रकारका परियोजनाहरू सुरु गर्न पर्याप्त धन।
तथाकथित खुला मन सम्मेलनमा सहभागी।
आधारभूत आय प्रमोटरहरू।
घृणित व्यक्तिगत कथाहरू, एनएलपी प्रविधिहरू।
तथाकथित पागल (feigned अर्थहीन) complottheorieen छलफल गर्ने। (bijv.Maud Oortwijn, Micha बिरालो)
रियल मेडमेन (शायद एमके अल्ट्रा) शर्त छ। (उदाहरणको लागि एन्टोन्स टिबेन)
उपरोक्त संकेतहरूको संयोजन।
यदि तपाइँ सबै थोप्लाहरू जोड्नुहुन्छ भने, Baphomet को रेखाचित्र सिर्जना गरिएको छ।
जडान गर्दै लेखे:
16 अगस्ट 2017 मा 15: 32
अन्डेन्ड र आकस्मिक सम्बन्ध पत्ता लगाउन अझै पनि पर्याप्त छ। सायद यसको बारेमा केही गर्न सकेन। उहाँ पीडित हुनुहुन्थ्यो। प्रसिद्ध ज्ञात भूमिका।
सत्रमा जाँदै छैन, कानुनी लागत तिर्न नसक्ने, तर जब बेमेलले फुटबलमा खडा हुन्छ। मूर्ख।
सवारी सुरू गरौं।
यो उच्च समयको निन्दा गर्न थाले, बेन वान डेन ब्रेक र अरेन्डे जेवत। त्यो लेख सबैसँग थियो र बेन वान डेनको बारे मा युवा हेरचाह र बेन कहाँ उनीहरुका छोरीहरु थिए भने आश्रयको बारेमा बिरिंक। तर सर्वोच्च समय किन निष्पादनको लेख प्राप्त गर्नुपर्छ? किनभने Argusoog वेबसाइट त्यो आधारको नाममा थियो?
Argus आँखा सेंसरशिप - रिंकेशन
सम्पादक Argusoog फेरि हजारौं यूरो दावी संग डराउँछ
माथिको लेख अन्तर्गत निम्न प्रतिक्रिया समय थियो। यो प्रतिक्रिया, तथापि, WebArchive मार्फत पुन: प्राप्ति किनभने प्रतिक्रिया 1 पृष्ठ सुरक्षित (वहाँ समय बचत गर्ने मान्छे हो हुनत) छ:
"लुका; वान डिटर भन्छन्:
26 अक्टोबर 2012 मा 12: 43
फाउन्डेसन हो हगस्टे टायडले केही समय अगाडी निष्पादनको लेख पाए। दुर्भाग्यवश, म यति मेहनत हँसिन्छु र मेरो मेजबाट फेंकयो। कहिल्यै केहि सुनेको र यसरी भूल, तर अब म जाँदै छु आइतवार (प्रस्तुति फ्री मानिस) अझै पनि म यो फिर्ता पाउन सक्नुहुन्छ भने हेर्न र म तपाईंलाई पाठ्यक्रम स्क्यान एफएफ र मेल को हुनेछ। "
धम्कीमा हानिकारक ** अद्यावधिक: एक मार्फत **
युवा हेरचाह छेदमा जान्छ
कफीको तीन डरलाग्दो कप
अरन्डेभेटले Argusoog लाई अलविदा भन्छ
"को ज्याला garnishment म डच अपहरण माफिया ज्याला garnishment रोक्न र केही € 160.000 को बाँकी ऋण बन्द मलाई गाली गर्न Argusoog मा भयो कि परिवर्तनहरू प्रतिक्रिया, निर्णय गरेको छ कि उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ सन्दर्भमा।"
हाँ ठीक छ।
यहाँ आफैं अन्डेन्डको क्यान्सर व्याख्या:
किन अरेन्ड Zeevat र Argusoog रडार देखि गायब भयो:
उत्तरबाट लुका जवाफ:
लुका वान डी को बारे मा व्याख्या (सर्वोच्च समय), एम्मा निर्माण, संयुक्त राष्ट्र संकल्प, अनेसो पुस्तकालय र अधिक।
17 अगस्ट 2017 मा 05: 55
जडान गर्ने, सुपर !!
म सबै चीज हेर्न को लागी ऊर्जा छैन, र मेरो पुरानो ल्यापटप सबै जानकारी दुर्घटनाग्रस्त र निश्चित रूप देखि समर्थित छैन।
तपाईं पनि argusoog प्रसारण भेट्टाउन सक्नुहुन्छ जहाँ रोब वान डेर जोन अचानकले भन्यो कि 'ढोकामा केही सज्जनहरू' र त्यो पुलिस बन्छ?
तर यी "सज्जनहरूले" के गरे? यो के गर्न निषेध गरिएको छ एक smack-कि-मा-द-कोठा-प्रसारण वा उल्ली भाषा निषेध गरिएको छ एक Tesla तार Tinker गर्न निषेध गरिएको छ?
यो कुनै पनि अर्थ छैन, र यो स्पष्ट रूप देखि धेरै खराब काम गरे।
राम्रो हुनेछ यदि तपाईं वा अन्य कुनै यहाँ यहाँ तर्क argusoog प्रसारण पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
Argus-eye को अर्थ: आँखाहरू जो नोटिस गर्न असफल हुन्छन्, धेरै ध्यान दिन्छन्।
त्यसैले केवल Argusoog रेडियो आभारी हुनुपर्छ, तर श्रोताहरू होइन?
श्रोताहरू यसैले भोग्छन्।
म सधैं सबै शङ्कालु, पक्कै पनि उल्लेखनीय कुराहरू प्रसारण को आदर जस्तै हुन र जमीन जायदाद 160.000 यूरो जरिवाना remitted गर्दा हेर्न, र तपाईं अब अझै तपाईं आर्थिक बर्बाद छन् दावी हिम्मत सम्म। निस्सन्देह त्यहाँ केहि गलत छैन।
त्यसो त अन्डेन्डले अब शिकायत नगर्न सक्दछ कि मैले डन्चबाट5वर्ष पुरानो (नामक) दूध गाईयो।
17 अगस्ट 2017 मा 08: 05
अरेन्डको अनुसार, उनको सहयोगी रोबड डी जेड द्वारा प्रदर्शन गरिएको खेलाडी शायद फ्रंटियर रेडियो संग थियो।
मलाई लाग्छ कि सही हुन सक्छ, मैले रेडियो कार्यक्रमहरू दुवैको एक मात्र प्रसारणको सम्झना गरेन र यसैले उनीहरूको समान सामग्रीको कारण भ्रमित भएन। त्यसैले यहाँ आउन बाहिर आउनु हुन्छ।
17 अगस्ट 2017 मा 12: 21
"तपाईं Argusoog प्रसारण पनि पाउन सक्नुहुनेछ जहाँ रोब वान डेर जोन अचानकले भन्यो कि 'ढोकामा केही सज्जनहरू' थिए"
होइन, मैले त्यो पछ्याएको छैन। तर तपाईं अझै पनि YouTube पृष्ठ Argusoog फेला मिस, वा फ्रंटियर वेबसाइट (फ्रंटियर संसार) मा यहाँ शुक्रवार प्रसारण मा निर्देशक 'गर्जन गर्न लिङ्क छ http://frontierworld.nl/radio/?cat=596
र आरेन्डसँग उनको श्वेतसँग बोल्न नसक्ने अधिकार छैन (खाईबाट गायहरू निकालेर)। पूरा परिवारहरू मंगलबार बाहिरिए। आफ्नो साइट मा चर्चा गरिएको सबै कुरा सही थियो, र जो यसको विरोधाभास छ त्यो चासो छ वा अर्को (satanic) अर्को पक्षबाट थियो। केही पनि पागल थिएन र सबै कुरा वैधानिक थियो, जब सम्म त्यो तस्वीर भित्र फिट जुन तिनीहरूलाई घोषणा गरिएको थियो। तपाईंले बेनि वान डिनर मुद्दाको बारेमा ती सबै कागजातहरू (र प्रतिक्रियाहरू) पढ्न र Zoermermer मा आश्रय पढ्नु पर्छ। जब तपाईंको लिङ्ग लेखिएको थियो र तपाईंको समयमा दावी गर्नुहुँदा तपाईंको कपाल सही हुन्छ। तर अरेन्ड अन्ततः पीडित हुनुहुन्थ्यो, किनकि उनी 'वित्तीय, भावनात्मक र सामाजिक स्तर' मा नाश भयो। कसरी आत्म-प्रतिबिम्ब मात्र सधैं ती अन्य! तर यो कसरी सबै अन्य मानिसहरूसँग भएको छ कि उनको वेबसाइटमा मंगलबार भेटियो? निस्सन्देह, तिनीहरू एआरएन्ड द्वारा भावनात्मक रुपमा र सामाजिक रूपमा भोट थिएनन्?
र त्यसपछि को पाठ्यक्रम तपाईं पहिले उद्धृत कि मुद्दा willemuijn छ। किनभने कति गहिरो तपाईं MBP निदान आत्म-घोषणा अनलाइन मानसिक रोगको चिकित्सक रूपमा पनि यदि तपाईं डुब्नु म, यो जन्मजात गर्नुभएको तर अन्यथा पछि एक अनौठो आमा जवान मृत्यु उच्चारण? राम्रो त तपाईं मेरो विचारमा, आफ्नो गधा कुनै भावना, छैन भने, अर्को उत्तिकै गहिरो soaking दल्नु अर्को दुःख मा एक शैतानी खुशी अनुभव छ। 'भावनात्मक रूपमा र सामाजिक रूपमा बिच्छेदन' बारे कुरा गर्नुहोस्।
17 अगस्ट 2017 मा 20: 18
मैले तर्कको बारेमा प्रत्येक प्रकरण सुन्नु भएको थियो। वान डन ब्रेकले पेश गरेको पेशा आफैमा म सानो पागल थियो।
मैले वान डेन बंकलाई धेरै सरल, अजीब बोल्दै भेट्टें र मैले शीर्ष माथि धेरै कथा पाएको थिएँ र मलाई विश्वास थियो कि बेन किनारमा थिएन।
जोरिस डेमिकिन प्रदर्शनमा मैले देखेको छु कि कुन एजेन्ट उत्तेजित गर्दछ र यस्तो नेतृत्व लिनेछ। बेन व्यावहारिक रूप देखि नाराहरु को सामने चिल्ला रही थियो। डिफिन एजेन्टर सिएज रोपणिंग उनको रसिनी टाउको संग - जुन मैले एक माईटर मा विश्वास गरेनन किनकी त्यो alt मा देखा पर्यो। मेडिया को प्रसोधन को नेतृत्व मा बाहिर गयो। चुपचाप अहिले खुसीसाथ मरेको छ।
17 अगस्ट 2017 मा 08: 51
म आफैं बैंकसँग बस्छु, किनकि त्यहाँ अझै पत्ता लगाउन र लेख्न निकै गाह्रो छ। र म यहाँ मानिसहरूलाई चेतावनी दिन चाहन्छु।
ती सहि प्रमाणपत्रहरूको बारेमा: भाग लिन जानु अघि म निश्चित रूपमा सावधानीपूर्वक सोच्न सक्दछ किनभने तपाईं कहिल्यै छुटकारा पाउन सक्नुहुन्न र तपाइँका साथ आफुलाई आफुलाई रिसाई गर्न पनि सक्नुहुनेछ। एक पटक खरिद गरे, तपाइँ प्रमाणपत्रहरूलाई कुनै पनि स्थानान्तरण गर्न सक्नुहुन्न वा तिनीहरूलाई बैंकमा फर्किनु हुन्न।
यी सहभागीहरूमा रिटर्न बाहिर निस्कँदा जोड जोडिएको छ, तर लागत बखतले प्रकट भएको छ, किनकि बैंक खुसी र आशावादी बनेको छ। तर के हुन्छ यदि फिर्ती निराश हुन्छ भने। त्यसोभए प्रतिभागिहरु हरेक दिन आफैलाई, तपाईंको बच्चाहरु र बच्चाहरुका बच्चाहरु को लागी प्रतिघण्टाहरु द्वारा भंग गरिनु पर्छ।
के त्यस्तो गति अभ्यासमा हुँदैन? खैर, तपाइँ त्यो थाहा छैन।
तपाइँले प्रमाणपत्र खरिद गर्नु अघि निम्न पुन: पढ्नुहोस्:
17 अगस्ट 2017 मा 10: 03
संयुक्त जन फाउण्डेसन होली बैंक पछि संगठन हो। सोसाइटीको घटना उनीहरूको पुनरुत्थान हुँदैछ। त्यसैले तपाईं साँच्चै मान्न सक्नुहुन्छ कि एड Bro Bros र Vh इरमा Schiffers को Cooperatie de Vrije मीडिया, पनि यसको लागि, अब प्रेरित को लागि, प्रेरित। इरमा Schiffers को Cooperatie डी Vrije मीडिया देखि फिर्ता ले लिया छ र उनको साक्षात्कार संग तिनी अब एक धेरै ठूलो दर्शकहरु मा केंद्रित छ। लेख, जसलाई यो विज्ञापन ब्रोयर द्वारा घोषित गरिएको थियो, गायब भएको छ, कम से कम म यसलाई फेरि देखि नहीं पा सकते
कोपरटिटी डी ब्लिले बी पछि संगठनमा फर्कनुहोस्
त्यो संयुक्त जन फाउन्डेशन हो।
युनाइटेड पी फाउन्डेशन (यूपीएफ) एक गैर लाभकारी आधार हो। हामी विकास र नवीन उत्पादन र सेवाहरूलाई प्रचार गर्छौं जुन समाजको सेवा हो। तेस्रो पक्षको सहयोगमा हामी समाजमा हाम्रा उत्पादन र सेवाहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दछौं।
यूपीएफ को उद्देश्य मानव जीवन को सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) मा वर्णन को रूप मा, सबै जीवन को राम्रो प्रबंधन को प्राप्ति मा योगदान को लागि छ। 10 डिसेम्बर 1948 मा, यूवीआरएम संयुक्त राष्ट्र संघ (संयुक्त राष्ट्र) देशहरु द्वारा हस्ताक्षर गरिएको थियो। बीचमा त्यहाँ 48 देशहरू संयुक्त राष्ट्रका सदस्य हुन्।
आज सम्म 1948 बाट, जीवनले देखाउँछ कि UPF उद्देश्य अझै प्रासंगिक छ। एक मात्र समाज नीलोबाट बाहिर आउँदैन र धेरै प्रतिबद्धता र समर्थन चाहिन्छ। सरकार चाहँदैन तर तर सक्नुहुन्न, किनभने यो वित्तीय प्रणालीमा फसेको छ। त्यसैले तपाईले सबै आवश्यक यथार्थवाद आफैलाई गर्नु पर्छ।
प्रेरणामा क्लिक गर्नुहोस् कि सहकार्य एकता को शक्ति के हो। समाजको लागि, र मानिसहरूका लागि। तपाईं हाम्रो लक्ष्यहरूमा यसको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ जुन एक वित्तीय प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा, उपभोक्ता रूचिहरू र कर प्रणालीको बारेमा हो। यदि हामीले साँच्चिकै छनौट भने यो फरक फरक हुन सक्छ।
एक योगदान छान्नुहोस्
हामी न केवल विकास, सल्लाह, प्रचार र लागू नगर्ने। हामी गठनमा हाम्रो आफ्नै सहकारी संस्थाहरूको लागि सदस्य सर्टिफिकेटका मुद्दाहरूको पनि ध्यान राख्दछौं, जस्तै डे ब्लिज बी (डीबीबी)। के तपाईं वर्तमान स्थिति संग तयार हुनुहुन्छ? त्यसपछि प्रश्न हो: तपाईं एक मात्र समाजको लागि कुन योगदान प्रदान गर्नुहुन्छ?
अनि प्रेरणा जाहिरा जादुई शब्द हो।
तर संभावना मा सबै राम्रो अधिकार संग।
वास्तविकता धेरै व्यवसायी जस्तै हो, किनकी जोओ। तपाईले सधैंभरि खरीद गर्नुहुन्छ। सँधै जडित। व्यक्तिगत रूपले, मलाई लाग्छ कि त्यो प्रलोभन परिप्रेक्ष्य छैन र त्यो नरम मार्गमा व्यक्त गरिएको छ।
17 अगस्ट 2017 मा 10: 17
अन्तमा: ती सचेत प्रमाणपत्रहरूमध्ये कतिजनाले शुभ बैंकको प्रमोटरले आफैले खरिद गरेका छन्?
सायद सज्जनहरू र महिलाहरू यसका बारेमा खुला हुन चाहन्छन्।
17 अगस्ट 2017 मा 10: 27
तपाईका योगदानहरूको लागि धन्यबाद। मलाई लाग्छ यो एक थप अध्ययनको लायक छ र यो अंग्रेजीमा लेखहरूको यस श्रृंखलालाई अनुवाद गर्न उपयोगी हुन सक्छ (रोनाल्डको अभिनयको अन्तर्राष्ट्रिय अपील दिएर)।
यदि कसैले अनुवादकको रूपमा स्वयंसेवक गर्न चाहन्छ भने, म यो सुन्न चाहन्छु।
17 अगस्ट 2017 मा 10: 34
कहिलेकाहीँ वास्तविक पैसा (चाँदी र गौकोङ्कनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य) समायोजित र / वा बैंकिङ द्वारा व्यवस्थित। फिएट पैसा दासत्व हो र उनीहरूको बैंकको साथमा ठुलो हुनुपर्दछ। प्रत्येक व्यक्ति र / वा परिवारले स्वतन्त्र रूपमा पोर्टफोलियो प्रबन्ध गर्दछ। ठूलो मात्रामा, केहि अन्य आंदोलनहरू र संगठनहरू (नियन्त्रण गरिएको नयाँ विश्व आदेश होइन) सँग साझेदारीमा प्रवेश गरेर केहि हुनेछ। मात्रात्मक रुपमा, दुश्मन को बढावा दिन को लागि संगठित संदर्भ मा sabotage को धेरै रूपों को अनुरोध गरिएको छ।
18 अगस्ट 2017 मा 19: 54
मैले अझै सम्म लेखेको छैन कि 'प्रेरणा' जादुई नयाँ जादू शब्द हो या हो, हामी ईयू छ, त्यसै कपडा एक सूट बाट।
17 अगस्ट 2017 मा 11: 51
@IdBroersma जानकारी र कामको लागि धन्यवाद।
हाकिम बैंक (डीबीबी) हाहा के मजाक ???? ???? ! के हामी अझै पनि डी एस बी थाहा छ? साथै यस्तो (एच) निष्पक्ष (?????????????) खुश बैंक !!!!!!!! डीबीबी = शैतानिक बेलजर बैंक।
Toujours ला VVD cherchez:
हामी थाहा पाउँछौं कि यो कसरी Scheringa बाट डीएसबी (यस साइटमा हेर्नुहोस् https://joop.vara.nl/opinies/vvd-ers-claimen-heldenrol-in-dsb-affaire ).
दुर्भाग्यवश साधारण व्यक्ति (अक्सर) यसमा हो। यसैले धेरै, यहाँ धेरै चेतावनीहरू।
यसलाई भन्नुहोस् ... यसलाई जारी राख्नुहोस् ... सबैजना यसको बारेमा सुने सम्म यो जारी राख्नुहोस्।
उनीहरूको शङ्का बेच्ने प्रयासमा उनीहरूले "मंगलबार पूजा" र आदर्शवादी तर विशेष गरी ऊनी शब्दहरूलाई ध्यान दिन्छन् जसमा तिनीहरू "शित" सुधार गर्छन् (अंग्रेजीको लागि)।
के मैले यहाँ "धितो" को लागि पैसा संग एक उल्लेखनीय सम्झौता देख्छु? टिभीमा झुन्ड्याउने कार्यहरूको साथ, ढोकामा सम्पादक आदि आदि आदि आदि सहित आदि।
हहाहा मान्छे ???? ???? ????
हे हो सकता है कि उनि हामिलाई एफएम मा या उपभोक्ता को गलत जानकारी को कारण सिर्फ "भ्रष्ट" न्यायाधीश मा मुकदमा गर्न सक्छन्! यसलाई विण्डोमा फेंक गर्न अनुमति छैन किनकि उनीहरूको आफ्नै दिशा र हिंसा, त्यसो गर्दैन। ???? ????
22 अगस्ट 2017 मा 19: 04
स्विट्जरल्याण्ड फर्किदै म खोज्दै तर यसलाई अब फेला पार्न सकेन। इरमा शेरिफरको वेबसाइटमा माल्टा भनिन्छ।
र एक टिप्पणीमा तिनी भन्छिन्:
"जोलो, यदि तपाईंले प्रसारण सुन्नुभयो, उनी भन्छन् कि तिनी विदेश जान्छन् किनभने नेदरल्यान्ड्स बन्द छ र सबै नयाँ पहलहरू र साथसाथै रोक्न। त्यसो कि समस्या निवारण गरिरहेको छ। "
मैले प्रसारण सुन्न सक्दिन।
अर्को बिन्दु जुन मैले ध्यान पुर्याउन चाहानुहुन्छ संयुक्त राष्ट्र फाउण्डेशन फाउन्डेशन हो, जो खुशी बैंक सहित सहकारी संस्थाहरू सेट गर्छ।
मेरो कामको जीवनबाट मलाई याद छ कि अक्सर निर्माणको लागि शीर्षमा नींवको साथ, जसरी बोर्ड बैठिन्छ, निर्देशकहरूको लागि खण्ड बहिष्कार गर्न छनौट गरिन्छ। कहिलेकाहिँ त्यहाँ बी.वी. को हो, होल्डिंग्स, तर शीर्ष मा आधार संग। र मलाई लाग्छ कि रोनाल्ड बर्नार्डले आफैले र स्वयंसेवकहरूको आफ्नै टोलीको लागि सुरक्षित निर्माणको लागि पनि चुनेको छन।
सदस्यहरू सबै अनन्तसम्मको सहकारीको मालिक हुन् र यस बैठकमा 1 मतदाता छन् (प्रमाणपत्रको मात्रा जो कि एक व्यावसायिक उद्यमको लागि हो)।
मलाई आशा छ कि तपाईका दर्शकहरूले यसलाई पढ्न र प्रमाणपत्रहरू खरीद गर्नु तीन पटक सोच्न सक्छन्।
यो आधार को राम्रो थियो जब मान्छे, अब यो अब शेयर को खरीद संग मामला छ, जोखिम को बाहिर इंग्ल्याक। साथै दायित्वको सन्दर्भमा।
र यसबाहेक म एक संगठन चित्र छुट्याउँछु, जसले पनि बोर्डको बीचको सम्बन्ध र सहकारीको सदस्यको सम्बन्धमा कानुनी सम्बन्ध कसरी देखाउँदछ। र त्यसकारण कसरी यो कानूनी दायित्वको सन्दर्भमा निर्देशकहरूको लागि व्यवस्थित गरिएको छ। यो कसरी सहयोगी संग सम्बन्धित छ।
अन्ततः, संयुक्त राष्ट्रसंघ फाउण्डेसनले यसको रचनाको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र र युनियनको योजनाहरूको साथ राम्ररी राम्रोसँग मेल खान्छ। यो भनेको भन्नुहोस्, कम्युनिज्म जुन प्रचार गरिएको छ तर आधुनिक र लोकतान्त्रिक जैकेटमा राखिएको छ।
प्रत्येक समय रोनाल्ड बर्नार्ड र सह र मीडियाले जोड दिन्छ कि यो नागरिकको पहल हो। एक बैंक र नागरिकों द्वारा। त्यो मेरो विचारमा सानो फरक छ। तर यो अझै मेरो अनुमान छ। त्यसोभए तपाईं र अरू कसैले यस कुरामा डुङ्गा राख्न योजना बनाइरहेका छन्। मलाई आशा छ कि मैले तपाईलाई सहयोग गरेको छु र अरूलाई थाहा छ जसले यो पढ्न, सडकमा। म पनि आशा गर्दछु कि तपाईं यो घटनाको लागि एक ठोस र व्यापार जस्तै दृष्टिकोणको विकल्प रोज्नुहुनेछ।
6 डिसेम्बर 2018 मा 12: 09
मार्टिन प्रश्न: जेन Monsterman हुनुहुन्छ? यसको बारे केहि केहि पाउन सक्दैन? नमस्कार
6 डिसेम्बर 2018 मा 14: 07
हो, यो टाईपो हो
के म उनको मनोनौवर विश्वास गर्नुपर्छ?
6 डिसेम्बर 2018 मा 15: 09
तिनीहरूले दोषी किन मलाई बताउन सक्नुहुन्छ?
मैले उनको पुस्तकहरु को केहि पढेको छ र मेरो धारणा छ कि त्यो, पत्रकार को रूप मा, सबै चीजहरु को पीछे छिपी छ कि सत्य को खोज को कोशिश गर्दै छन्।
हालै उनले सिरियाको बारेमा बुबा ड्यानियल मेईज (यो पनि YT मा हेर्नुहोस्) सँगै गलत प्रतिवेदनबारे व्याख्यान दिए। एक स्पष्ट सन्देशको साथमा हाम्रो अटलांटिक मिडिया पूर्णतया बिरामी हुन्छ।
तिनी मेरो बारेमा सत्य, ईमानदार र गम्भीर रूपमा आउँछन्?
6 डिसेम्बर 2018 मा 16: 18
तपाईं प्रभाव छ ... यो एक राम्रो सुरक्षा नेट को उद्देश्य हो ... कि तपाईं ईमानदारी को छाप प्राप्त।
तिनीहरू राजनीतिक दुर्व्यवहारमा फोकस गर्छन्, तर मनोचिकित्सक वा ह्याक्सक्स प्रयोग गरेर मिडियामा कठोर झूटहरू बेवास्ता गर्दैनन् भने नयाँ उपायहरूको लागि स्वीकृति मोडमा मानिसहरू प्राप्त गर्न।
तिनीहरूले प्राय: सीआईएमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नेछन्, तर कहिलेकाहीँ AIVD मा। तिनीहरू एक गहिरो अवस्थाबारे कुरा गर्नेछन्, तर ठूला केकबाट पाईको एक जाँच गरिएको टुक्रामा इंगित गर्नुहोस्।
तिनीहरू झूटा झण्डाहरू बोल्नेछन् तर ह्याक्सक्सको अस्तित्वलाई झल्काउने वा अस्वीकार गर्नेछन्।
के तपाई चोर हुनुहुन्छ जसले वर्षौं खरिदमा खर्च गर्यो र भन्छ कि उसले तपाईंको वालेट र कार कुञ्जीहरूमा परिवर्तन गरेको छ? सम्भवतः यदि उसले भगवानमा परिवर्तन गर्यो र क्रोक क्लबको बारेमा पुस्तक लेख्यो ...
5 जनवरी 2019 मा 06: 17
"खबर कसरी विश्वसनीय छ?" ठीक छ।
र कोन वर्मेरेन कसरी विश्वसनीय छ र उहाँका अतिथिहरू कसरी विश्वसनीय छन्?
मलाई थाहा छ कि कोन सही छैन। (मैले धेरै पटक वर्णन गरेको छु)। र यो साक्षात्कार हेर्न पछि, मलाई थाहा छ कि उनका अतिथिहरू एकदमै क्लबबाट हो।
म पनि उत्सुक छु जहाँ त्यो सजाय हुनेछ। कुनै पनि अर्थ छैन।
त्यहाँ के भन्नुहुन्छ त्यो धेरै धेरै छ। और म अझै Cees हामिलिंक को बारे मा कुरा नहीं गरेर रहयो हूँ।
यो मेरो लागि स्पष्ट छ। समयका बीच बनाइएका मजाकहरू दर्शकहरूलाई सम्मोहन गर्नका लागि हुन्। सामान्यतया प्रयोग गरिएको चाल।
5 जनवरी 2019 मा 07: 39
मिनेटमा 16: 50 यो स्पष्ट हुन सक्छ।
मिनेटमा 16: नाक र होंठका बीच 55 "तपाइँले केहि गर्न सक्नुहुन्छ" bla bla bla।
निश्चित Cees। तपाईलाई केहि बनाउनुहुन्छ।
यो कसले विश्वास गर्छ? (निस्सन्देह बिच सत्यको साथ मिल्दछ जुन बाहिर आउनेछ)
टोन, "मजाक"। यो सबै स्पष्ट छ एक खेल। तर हो, म आफैलाई कल्याण गर्न को लागी केहि पनि छैन।
त्यसैले केवल हेट हल्डर हेर्नको अर्थमा। र शायद यो उपहार हो। जब मैले देख्छु कि सम्पूर्ण हेरविचारकर्ताहरूको सम्पूर्ण हेरचाहहरूले यो सबै देख्दैनन्, त्यो जस्तो देखिन्छ।
5 जनवरी 2019 मा 09: 20
मिनेट 4: 58 Cees आशा गर्दछ कि एक दिन उसले व्याख्यान को समयमा मृत हुनेछ। मलाई आशा छ।
मिनेटमा 5: 14 पछि केहि megalomania पछि, बकवास मजाक पछि।
तर ठीक छ। सक्षम हुनुपर्दछ .... तर त्यो चाची यूएन को कारण संक्रमित टिममर्मन भेटिन्छ?
तर संयुक्त राष्ट्र कोफी एानानको पूर्व सल्लाहकार संग मेजमा बस्नुहोस् (र एक विरोधीको रूपमा होइन)।
मिनेट 16: 18:
अनि नेदरल्यान्डमा सबै कारहरू यस्तो कारबाहीमा "हामी आइरेलको पछि लाग्यौं" कारमा।
हो, म अझै प्रोफेसर Cees लाई सम्झन सक्दिन। (यो मानिसले विश्वविद्यालयहरूमा व्याख्यान दिन्छ)
मिनेट 16: 42: Cees को अर्को मजाक को लागि समय। तपाईं एक यौन पागल हुनुहुन्छ भन्नुहोस्। केहि राम्रो तरिकाले राम्रो तरिकाले काम गर्दछ, भले पनि टिप्पणीले वास्तवमा भावना सिर्जना गर्दैन।
मिनेट 20: 30: "मलाई लाग्छ कि पत्रकारहरू झूटा र cheaters हुन्, तर तिनीहरू प्राय: आफ्नो होमवर्क गर्दैनन्"
यो सबैको साथ कसरी प्रोफेसर Cees सँगै आउँछ भनेर व्याख्या गर्नको लागि धन्यवाद।
तपाईं एक उत्कृष्ट वक्ता हुनुहुन्छ। यो पैसाको लायक छ।
6 डिसेम्बर 2018 मा 17: 40
Mi गलत छ। उनले अन्य चीजहरूको बारेमा बताए, कि पूर्व-प्रधानमन्त्री बर्ट कोइडरहरू, जसले यसबाट आईएसआईलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्यो, AIVD मा काम गर्यो। फ्रान्स टिमम्यानमहरूसँग पनि अतीत छ, वा कम से कम संयुक्त राष्ट्रसँग, र त्यसकारण, यसको अनुसार संक्रमित।
यद्यपि उनी एक मध्यम तरिकामा आउँछ र साँच्चै प्रचार वा क्रांतिको बारेमा ल्याउँदैनन्, उनीहरूले पनि ईमानदार रूपमा सतहमा विनाश ल्याउन सक्छन्।
6 डिसेम्बर 2018 मा 17: 51
मेरो बाट तपाईं वरिपरि घुसाउन सक्नुहुन्छ।
तिनीहरूले खुलासा गर्न सक्छन् कि थोडा दुखाइ, जब सम्म लामो आकार स्पष्ट छैन।
म यसको लागि जान्छु! शायद जेना एक ईमानदारी देखि रूपान्तरण हो!
5 जनवरी 2019 मा 07: 43
मार्टिन, गहिरो अन्तरवार्ताको लागि आमन्त्रित गर्नुहोस्। चाची भर्नुहोस्।
राम्रो हुनेछ, तर मेरो भावना छ (स्पष्ट रूपमा महसुस गर्छ) कि त्यो चाहँदैनन्।
5 जनवरी 2019 मा 11: 51
मलाई लाग्थ्यो (स्पष्ट महसूस) कि शब्द troll यहाँ लागू हुन्छ ...
4 जनवरी 2019 मा 16: 19
अब म के बारे धेरै उत्सुक हुनुहुन्छ कि के तपाईं विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यस्ता शैतानिक अनुष्ठानहरू अवस्थित छन्। म आफैंलाई विश्वास गर्दछु र म बरु यस समस्याको सामना गर्न चाहन्नँ, केवल मलाई थाहा छैन कहाँ। हरेक समय मैले बौद्धिक छलफलमा कहीं एक व्यक्तिको बारेमा राय र न्यायको साथ अन्त गर्दछु जो आफ्नो अनुभव बारे सत्य बोल्छ वा गर्दैन।
4 जनवरी 2019 मा 23: 48
हड्डी नगर्नुहोस् र त्यसपछि आफ्नै अनुसन्धान गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईंको निष्कर्षमा फर्कनुहोस्
तर आफैलाई निर्भर रहन नदिनुहोस्।
त्यसैले केही महिना वा वर्ष पछि, हामी तपाईंलाई आफ्नै निष्कर्षमा फर्किनेछौँ
5 जनवरी 2019 मा 01: 05
आह, मलाई माफ गर्नुहोला, मैले व्यक्तिगत रूपमा तपाईंको प्रतिक्रियाको साथ आक्रमण गरेँ। त्यो मेरो इरादा थिएन।
4 जनवरी 2019 मा 23: 50
म यो अनुभवको रूपमा :), पृथ्वीमा समस्या निषेध सामूहिक कुरा हो। यस कारण, मार्टिनले उनीहरूको प्रणाली (समय, ध्यान र प्रयास) लाई रोक्नका लागि सकेसम्म धेरै मानिसहरूको आँखा खोल्न खोज्छ। दुर्भाग्यवश, एक व्यक्ति (वा एक जोडी) संसार सुरक्षित गर्न सक्दैन। एक विश्व युद्धले यो बकवासमा भाग लिन इन्कार गर्दा विश्व युद्ध मात्र अगाडि बढ्न सक्छ। दुर्भाग्यवश, मानिसहरू अझै पनि प्रणाली द्वारा सिर्जना गरिएका कामहरूसँग व्यस्त छन् ... रोजगारी, करियर, शेल्फमा रोटी। अर्थव्यवस्था बढ्नैपर्छ! हामी पनि टुक्राको लागि तिर्नु पर्छ जहाँ हामी फ्याट पैसा संग बस्छौ! म यो मद्दत गर्न सक्दैन, किनकी मेरो छोराछोरी छन् ... त्यसोभए हामी घातक सर्कलमा फसेको छौं, जहाँ हामी प्रणालीलाई समर्थन गर्दछौं।
जब प्रणाली शक्ति हराउँछ, ऊर्जा अब पृथ्वीमा सामूहिक चेतनाको दमनमा हराएको छैन। चूहा दौड गायब हुनेछ र यससँगै प्रणालीमा स्थिति हराउने डर। तर होईन ... ठूला उदाहरणहरू तिनीहरूको राम्रा भुक्तानी कार्यहरूसँग प्रणाली राख्दछन् र पहेंलो भित्ताहरू शासकहरू र ठूला उदाहरणहरू व्यवहार गर्न चाहन्छन्। असन्तुष्ट मानिसहरूले कहिलेकाहीं ती शासकहरूलाई अलग पार्छन्? मेरो विचारमा, यो एक वा बढी ठाउँहरूमा सुरू हुनेछ, जहाँ मानिसहरू आत्मनिर्भर रूपमा बाँच्न सुरु हुनेछन्। त्यसपछि त्यसो भए कि वर्तमान प्रणाली पुरा तरिकाले अनावश्यक छ। प्रणाली त स्वचालित रूपमा अनावश्यक हुनेछ र मानिसहरूले फेरि जगेडा गर्न सक्छन्। तर हो, शासकहरूले प्रणालीलाई आफ्नो ऊर्जा दिने सबै कुरा गर्न सक्छन्: पहेंलो भत्काउने, विरोध गर्ने, नयाँ प्रतिज्ञामा मतदान गर्न, नयाँ फोन पनि उपयोगी छ ... र समयमै टिभी हेर्न पछि, किनभने तिनीहरूले अर्को दिन मद्दतको लागि प्रणालीलाई सम्भवतः सबैभन्दा हालैको धर्मको बदमामा राख्न को लागी मद्दत गर्नु पर्छ: पैसा।
यदि प्रणाली घट्छ र मानिसहरूले उनीहरूको पूर्ण चेतना फिर्ता लिन्छन्, तब शैतानिक संस्थाहरूले यहाँ भन्न केही गर्न सक्दैनन्। पहिलो के हो? चिकन वा अन्डा? प्रणालीको पतन वा मानवताबारे जागरूकतामा वृद्धि?
5 जनवरी 2019 मा 02: 54
त्यसपछि मैले पछि सोधे। मेरो विचारमा, सत्तामा भएकाहरूले मानिसलाई विचलित गरेर तिनीहरूलाई अज्ञानमा छोडेर प्रणाली कोयम राख्न प्रयास गर्छन्।
लोभ र निर्भरता सामाग्री सामाग्री र यस प्रकारका सामग्री 'सबूत' को लागी कि समस्याहरू छन् र सत्य हो / विकृत हुन्छ।
सामूहिक रूपमा पृथ्वीमा समस्या निवारण गर्न मानवताको जागरूकतामा साम्राज्य क्षमतालाई पनि सक्रिय पार्दछ।
5 जनवरी 2019 मा 13: 51
Cimi, म तपाईंलाई पुरा तरिकाले बुझ्दिनँ। तपाईका दृष्टि अनुसार नेताहरूले कुन प्रणालीमा राख्नुपर्छ?
र कुन समस्या (1 समस्या) पृथ्वीमा हामी सामूहिक रुपमा निलम्बन गर्न चाहन्छौ?
र त्यसपछि वा luciferaans कम्युनिस्ट तानाशाही प्रणाली को एक प्रकारको अन्तमा (को "सामान्य suspects" को परीक्षण पछि) अराजकता (मेरो प्राथमिकता) र crystallization (अराजकता साथ दिनु हुनेछ भन्ने अराजकता) को गरेपछि लक्षित एक प्रकारको हुन सक्छ मुक्तिको कुरा वा केहि जस्तै?
किनभने एक तानाशाहीको साथमा हामीले अझै पनि समस्या छ। कुनै स्वतन्त्रता र त्यो सबै।
तपाईंको कल्पना निःशुल्क चलाउन दिनुहोस्, ठीक छ।
5 जनवरी 2019 मा 06: 37
Cimi, मैले यसको बारेमा विश्वसनीय कथाहरू कहिल्यै फेला पारेन।
तिमी? (यसैले म शुद्ध शैतानिक अनुष्ठान को मतलब छ जहां बच्चाहरु लाई बलिदान गरिन्छ)।
5 जनवरी 2019 मा 06: 54
Cimi, ताकि धेरै परेशान बचाउँदछ। एउटा अवस्थित समस्याको समाधान।
5 जनवरी 2019 मा 13: 16
कार्यक्रम, एमके-अति, सम्राट - - मन नियन्त्रण, र अन्य ग्रहहरूमा जीवन गर्दा सचेत Dutchman म शैतानी संस्कार / मा विश्वास गर्छन्।
म एक ईश्वरीय मा विश्वास गर्दैन र चिन्तित केहि चीज छैन।
5 जनवरी 2019 मा 18: 28
ठीक छ। तर यही कारणले मैले पुरु संतानिक अनुष्ठानलाई भने। किनकि प्राय: छलफलले एम.के. अल्ट्रा, बाल दुर्व्यवहार आदिमा परिवर्तन गर्दछ। म के कुरा गरिरहेको कुराको बारेमा कुरा गर्दैछु। रोनाल्ड बर्नहार्डको बारेमा शैतानिक अनुष्ठानहरू, त्यसो भए जहाँ बच्चाहरु दुर्व्यवहार र हत्या गरिन्छ।
यो जस्तो देखिन्छ कि केहि एमके अल्ट्रा पीडितहरू छन् जुन उपन्यास अनुष्ठानहरूको बारे कथाहरू बताउन क्रमादेशित छन्।
यदि तपाईंले ती कथाहरू ठीकसँग विश्लेषण गर्नुहुन्छ भने, केही चीजहरू गलत छन्।
हामी तिनीहरू शैतानी संस्कार भयो होला महल एक बच्चाको रूपमा flown थिए नै कथा धेरै सिकार सुन्न।
तर तपाईं महल एक्स जस्तै। एक्स राजकुमार, बहु राष्ट्रिय एक्स एक्स अभिनेता को निर्देशक, गायक एक्स, राष्ट्रपति Reagan, श्री र श्रीमती क्लिंटन मा उपस्थित थिए सुन्न भने। बैंकर रोनाल्ड बर्नहार्ड आदि। त्यसपछि मैले कल्पना गर्न प्रयास गरें कि कसरी भयो। त्यसैले त्यहाँ पहिलो थियो भन्नुभयो: "" हामी ड्रैगन गरेको महल अहिले हो र हामी चाँडै नै एक शैतानी अनुष्ठान undergo भन्ने सेलिब्रेटीहरू परिचय हुनेछ, "
त्यो जस्तो कि काम गर्दैन। यदि तपाई त्यहाँ साँच्चिकै एक शैतानिक अनुष्ठान गुमाउनुहुन्छ भने, तिनीहरू पनि हत्यारा हुनेछ र तपाईं खानेछन्। होईन, निस्सन्देह होइन, उनीहरु तपाईंलाई फेरि जान दिन्छन् ताकि तपाईं इन्टरनेटमा बताउन सक्नुहुन्छ। Satanists या luciferans मा गौतम सुरंग र आत्मा पाक कला र जस्तै जस्तै खुल्ला जस्तो अजीब अनुष्ठानहरू छन्, हामी त्यसमा सहमत छौं।
5 जनवरी 2019 मा 19: 45
पुरानो बक्सबाट। एक होक्स / पीएससी-ओपन। टोओस निजेनहिस द्वारा खेल्ने। यदि तपाईं यो छातीमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको गम्भीर समस्या छ।
मैले अर्को भिडियो एक घण्टा अगाडि भेटें। मैले भर्खरै 21 मा समाप्त गर्यो: 40। र त्यो एक प्रशंसा योग्य छ, मैले यति सोधे।
5 जनवरी 2019 मा 20: 48
फियोना बार्नटले हेरेको छ। समान कपडा एक सूट।
तर जब मैले भिडियो अन्तर्गत टिप्पणीहरू पढें, प्रायः सबैले यसलाई मीठा केकको निलो पार्छ।
5 जनवरी 2019 मा 20: 30
र त्यसपछि मैले पनि एमके-अल्ट्रा जस्तो आकृतिको बारेमा केही रोचक जानकारी छ।
जुलियन एन्जिनियन एक भिन्नतामा उभियो। "परिवार"
साक्षीहरू स्पष्ट रूपमा प्रामाणिक छन्।
पहिलो मिनेट 24: 42। त्यहाँ हामी जूलियन छ।
« 'ऊतक नैनोट्रान्सफेसन' नैनो क्षतिग्रस्त शरीरको कक्षको मरम्मत गर्न सक्छ
रोनाल्ड बर्नार्ड, इर्मे Schiffers, विज्ञापन ब्रोयर, को Coperperie Vrije मीडिया: सच्चा चाहने को लागि AIVD सुरक्षा जाल? »
कुल भ्रमण: 2.547.785
Sanne op मिनियापोलिस जर्ज फ्लोड पुलिस हत्या गर्ने तरिका गृहयुद्ध जारी गर्ने?
विश्लेषण गर्नुहोस् op मिनियापोलिस जर्ज फ्लोड पुलिस हत्या गर्ने तरिका गृहयुद्ध जारी गर्ने?
ClairVoyance op मिनियापोलिस जर्ज फ्लोड पुलिस हत्या गर्ने तरिका गृहयुद्ध जारी गर्ने?